ဝန်ခံကတိသိမ်း – Grab Love Story
ပြည့်စုံလီးကိုစမ်းကြည့်ပြီးဖူးအိအခန်းထဲပြန်ဆွဲခေါ်လာခဲ့လို့ မြဖူးကလှမ်းကြည့်နေတာကိုနှစ်ယောက်လုံး မမြင်လိုက်ကြဘူး။ မမတို့လင်မယား အရေးပေါ်ကိစ္စဆို ပြီးခရီးရက်ရှည်သွားရတော့မော်မော်က ကားမောင်းပြီးလေယာဉ်ကွင်းကိုလိုက်ပို့ ရတယ်။လေယာဉ်ကွင်းရောက်တော့အ ရင်ကတပ်ရင်းမှူးကြီးနဲ့ဆုံမိတာနဲ့စကား ထိုင်ပြောကြတာပေါ့။တပ်ရင်းမှူးကြီးဆို ပေမယ့်အသက်ကလေးဆယ်ပိုပိုပဲလေ.. ဘောလုံးကန်.တင်းနစ်ရိုက်နဲ့အားကစားကလည်းသိပ်မပြတ်ဘူးဆိုတော့အတော် လေးအရွယ်တင်ပါတယ်။တပ်ထဲမှာနေခဲ့ တုန်းက ဒီဘဲကြီးကမော်မော့်ကိုရိတိတိနဲ့ ဖန်ခဲ့ဖူးတယ်လေ..သိတာပေါ့။သူကတပ် ထဲမှာတပ်ရင်းမှူးဆိုတဲ့အာဏာတွေလုပ် ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့အရာရှိတွေကိုချယ်လှယ်ပြီး အရာရှိကတော်တွေကို ပတ်ဝါးနေတာ။ စစ်သားဆိုတာမျိုးက အိမ်ကထွက်လိုက် ပြီဆိုရင်တစ်နှစ်ပိုပိုကအိမ်ပြန်မရောက် နိုင်တော့ဘူး..မိန်းမတွေကလီးငတ်တော့တာပဲ။အဲဒီတော့အသက်အန္တရာယ်ကင်း ဖို့နဲ့လီးမငတ်ရဖို့ အရာရှိကတော်တွေက လင်မသိအောင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့သူ့ ဆီသွားသွားပြီးမကြာခဏ စောက်ပတ် ဆက်သ,ကြရတယ်။အကြောင်းကတော့ ကတော်တွေကသိပ်ရှာနေဖို့မလိုပါဘူး.. သူလိုးချင်တဲ့အရာရှိကတော်ကို နေရာနဲ့ အချိန်ပါ လင်ဖြစ်သူတွေသံသယကင်းရ အောင်သေသေချာချာသူဖန်ပေးတာပါ။ မော်မော့်ကိုလည်း ခွင်ဖန်ခဲ့သေးတာပေါ့. သွားလေသူကခေါင်းမာတော့စေတဲ့ကျွန် ထွန်တဲ့နွားပဲ..လွှတ်တဲ့နေရာသွားမယ်.. အောက်မကျို့ ရဘူး ဆိုလို့သူ့မှာ ဒီဆုံကြီး ကိုမြင်ငတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ရတာလေ။အပြင်မှာ မုဆိုးမဘဝနဲ့အခုလိုပြန်တွေ့ရတော့ရော ဂာဟောင်းထ,ပြီးချက်ချင်းကြီးပဲ အသဲအသန် ထမင်းကျွေး ဘီယာတိုက်နဲ့ ဂွင်ဖန် လာတော့တာပေါ့။ သူဝါသနာကြီးလို့သာအရာရှိကတော် တွေကိုပတ်ဝါးနေပေမယ့် သူ့မိန်းမက အ ကိတ်ကြီး။အပျိုဘဝကတည်းကမယ်ရွေး ခံခဲ့ရတဲ့အကိတ်။အဲဒါကိုနိုင်အောင်မဖြိုပဲ ကလေးမရဘာမရနဲ့အရာရှိကတော်တွေ ကိုပတ်ဝါးနေတော့မိန်းမကဘယ်အငတ် ခံပါ့မလဲ..နောက်ချန်အရာရှိနှစ်ယောက် လောက်မွေးပြီးတိတ်တိတ်ခေါ်ကုန်းပစ် တော့တာပေါ့။ဒါလဲ သူကအခုထိကိုမသိ သေးဘူး..ကတော်ကြီးအဲလိုကုန်းနေတာကိုမော်မော်တောင်မှအလုပ်ကိစ္စနဲ့သူတို့ အိမ်ကိုနေ့ခင်းကြီးရောက်သွားတုန်း ပက် ပင်းတိုးပြီးမိလို့သိခဲ့တာ။
မိတာမှအိပ်ယာ ပေါ်တုံးလုံးကြီးတွေလိုးနေတုန်းမိတာဆို တော့ သူတို့အဝတ်တွေတောင်မဝတ်နိုင် သေးပဲဝန်ခံတောင်းပန်ကြရတော့တာပဲ ပေါ့။မော်မော်ကလည်းကျောင်းဆရာမ.. အိမ်ထောင်သည်ပဲ..ကိုယ့်ကိစ္စလည်း မ ဟုတ်တော့ ဟိတ်နဲ့ဟန်နဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေးနေပေးလိုက်တော့ကတော်ကြီးနဲ့ညီအစ်မအရင်းလိုရင်းနှီးသွားပြီးအားလုံးဖွင့် ပြောပြတော့တာပါပဲ။ ပြောပြတာမှ အိမ်ထောင်သည် အရာ ရှိကတော်ချင်းဆိုတော့အရှက်မရှိအကုန် ပြောပြတာ..သူသိပ်နှာကြီးတဲ့အကြောင်း တစ်နေ့တစ်နေ့အနည်းဆုံးသုံးချီအလိုးခံ ရမှအာသီသပြေတတ်တဲ့အကြောင်း..အ ထူးသဖြင့်လင်းဆွဲကို အာသီသကြီးတဲ့အ ကြောင်း..နောက်ထပ်အရာရှိငယ်လေးတစ်ယောက်ထပ်မွေးထားပေမယ့် အဖိုး ကြီးကညတိုင်းရှိနေတာမို့ လင်းဆွဲအလိုးခံရဖို့တော့လမ်းမရှိတဲ့အကြောင်းတွေက အစ,နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ပြောတဲ့အထိ ရင်း နှီးသွားခဲ့ကြတာ။ကတော်ကြီးဆိုပေမယ့် မမမြထွေးနဲ့မှအသက်ရွယ်တူလောက်ပဲ ရှိဦးမှာပါ..ဘော်ဒီကမော်နဲ့သိပ်မကွာပေ မယ့် သူကပိုကိတ်သလားလို့ထင်တယ်။ ငယ်ကတည်းကရွှေမှုံ စားပြီးကြီးလာခဲ့ရ တဲ့သူဆိုတော့ မော့်ထက်ပိုနုနေတယ်ဆို တာကိုတော့မငြင်းနိုင်ပါဘူး။စောက်ပတ် ချင်းယှဉ်လို့ကတော့ မော့်စောက်ပတ်ကပိုနုနေမှာအမှန်ပဲ။စိတ်ကူးတစ်ခုရတာနဲ့ သူတို့လင်မယားဖုန်းနံပါတ်တောင်းထား ပြီးအလိမ္မာနဲ့ပြန်ခဲ့လိုက်တယ်။ ” သင်းရေ..သမီး ” ကားလေးကိုဂိုဒေါင်မှာထိုးပြီးအိမ်ဖက် လျှောက်လာရင်းနောက်ဖေးပေါက်ကဝင် လာတော့အသံပေးလိုက်တယ်။အိမ်ထဲ ကထွက်လာတာက မင်းမင်း. ” မမသင်းမှမရှိတာဒေါ်လေးကလဲ.. သူတို့ကျောင်းမှာမိတ်ဆုံပွဲရှိလို့ဆိုပြီး သူ့ သူငယ်ချင်းတွေလာခေါ်သွားတာပဲ..မအိ တို့အိမ်မှာအိပ်မယ်တဲ့..စိတ်မပူဖို့မှာသွား တယ်..ဒီနေ့ညတစ်အိမ်လုံးမှာသားနဲ့ဒေါ် လေးနှစ်ယောက်ထဲ..ဒချိ ဒချိ..ခိခိ..” ” ဟွန့်..တော်တော်ပျော်နေတာပေါ့ ဟလား.ရပါလိမ့်မယ် ဒချ ဒချိ..ခ်ခ်..ဒါရီး ပဲ ရမယ်..” စောက်ဖုတ်ကြီးကိုပုတ်ပြလိုက်ပြီးမျက် စောင်းလေးထိုးရင်းပြောလိုက်တော့ ” ဟီးဟီး..အဲစောက်ဖုတ်အလတ်ကြီး မှသားကအားရပါးရယက်ပစ်ချင်တာ.ဒါမျိုးစောင့်နေတာကြာပြီ..လာခဲ့ တစ်ညလုံး အမုန်းဆွဲမယ် ” ဇွတ်အတင်းဖက်နမ်းတော့တာပဲ.ချွေး တွေသံတွေနဲ့ဆိုလဲမရဘူး..အဝတ်လဲဦး မယ်ဆိုလဲမရဘူး..စောက်ပတ်ကညှီစော် နံမှာစိုးလို့ရေချိုးဦးမယ်ဆိုလဲမရဘူး.စိတ် မရှည်တာနဲ့…ကဲ.ယက်တော့ရှင် ယက်ပါ တော့.. ဆိုပြီးသူ့ကုတင်ပေါ်ခုန်တက်လို့ တုံးလုံးကြီးချွတ် ပေါင်နှစ်လုံးဖြဲကားထား ပေးပစ်လိုက်တယ်။
တကယ်တမ်းတော့ စောက်ပတ်ယက် တာကဆယ်မိနစ် ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် ရယ်ပါ။စောက်စေ့ကိုလှိမ့်လှိမ့်ဖိချေပြီးသူ့ လျှာကြီးစောက်ခေါင်းထဲထိုးထဲ့မွှေပေးတဲ့ အရာသာကခံရခက်တယ်။ကိုယ့်ဖင်ကြီး ပင့်ပင့်ကော့တက်သွားအောင်အသွေးအ သားထဲကစိမ့်စိမ့်တက်လာတာမို့.. တော် ပါတော့ လို့အော်ပြီးတောင်းပန်နေလို့လဲ မရပ်ဘူး။မရပ်တဲ့အပြင် သူ့လက်ချောင်း နှစ်ချောင်းပူးနဲ့စောက်ခေါင်းထဲကိုထိုးထဲ့ ပြီး တစ်ပေါက်ပေါက် တစ်ပတ်ပတ်နဲ့အ သံတွေမြိုင်မြိုင်ကြီးထွက်နေအောင်ဆက် တိုက်ကြီးဆောင့်ပေးနေတော့ အရသာ ကြောတွေစန့်တွန်းထွက်ပြီး သူ့မျက်ခွက် ကိုစောက်ရည်တွေနဲ့ပန်းပစ်တော့မှပဲ.. လျှာကြီးနဲ့မွမွ မွမွလေးယက်ပြီးရပ်တော့ တယ်။စောက်ခေါင်းထဲကသူ့လက်လေး တွေဆွဲထုတ်လာတော့ပေကျံနေတဲ့မော့် စောက်ရည်တွေကို မော်မျက်နှာစေ့စေ့ ကြည့်ရင်းသူ့ပါးစပ်ထဲငုံစုပ်ပစ်တာ ချစ်ဖို့ ကောင်းလိုက်တာ။ ” အဟင့်..မျှော့သွားပြီကွာ..ဟူး.. လင်သာယူခဲ့ရတာ ဒီလောက်မခံစားခဲ့ရ ဘူး..ယက်ပြီးရင်လဲ တော်တော့..ဒီက ပြောစရာရှိသေးတယ် ” ” ဟင့် ဟင့်.ရမယ်ရီး.ခိခိ.လီးပဲရမယ် ဒီလီးကြီးပဲရမယ်..ခိခိ..တစ်ညလုံးလိုးပြီး မှ တော်မှာ..ဟီဟိ..အကိတ်ကြီးတော့ ဒီ ညအသေဖုတ်ပစ်မယ် ” ” ဟောတော်..ပြောတုန်းကတော့ အဲ စောက်ဖုတ်အလတ်ကြီးယက်ရုံပဲ ဆို..အ လိုးခံရဦးမှာလား..ခိခိ..” ” အော.တစ်ညလုံးအမုန်းဆွဲမှာပါဆို. လီးမချွတ်ပဲကို လိုးပစ်မှာ ” ” ခိခိ..ယုံတယ်ရှင်..ယုံတယ်…တော့်အမေကိုတောင် တော်အဲလိုလိုးခဲ့သေးတာပဲ..ကျွန်မကိုဆိုရင်တော့..ခ်ခ် ပြော.. ဘယ်လိုခံပေးရမလဲ..ကုတင်စောင်းမှာ ဖင်တေ့ခံမယ်..မတ်တပ်ရပ်လိုးလိုး..ထိုင် လိုးလိုး..ခွလိုးလိုး..စိတ်တိုင်းကျလိုး.တစ် ညလုံးလိုး..ရော့ ” သူ့လီးကြီးစောက်ခေါင်းထဲစိမ်ထားပြီး ကြာကြာနေမှတစ်ချက်..ကြာကြာနေမှတစ်ချက်..မွမွ မွမွနဲ့ ခပ်ရွရွလေးဆောင့်လိုးပေးနေရင်း ဒေါ်လေးပြောပြသမျှကိုမကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်နဲ့နားစိုက် ထောင်ပေးနေမိတယ်။ကိုယ်ကမဆောင့် ပဲငြိမ်နေရင်လဲ သူညှစ်ညှစ်စုပ်နေတာနဲ့ပဲ လီးရည်တွေပန်းထုတ်ပစ်မိမှာသေချာသ လောက်ရှိတယ်လေ။ဒေါ်လေးဒီအိမ်ကို ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ရော.ယောင်္ကျား တိုက်ပွဲမကျမီရှေ့တန်းထွက်နေတဲ့အချိန် တွေရော တစ်ဆက်တည်းတွက်လိုက်ရင် သူ့စောက်ပတ်က လီးနဲ့မတွေ့ရတာဆယ် လ.တစ်နှစ်တော့ကြာသွားပြီ။အသက်အ တော်ကြီးမှအိမ်ထောင်ကျ..အပျိုရည်က သိပ်မပျက်ခဲ့ရလေတော့အင်မတန်ကျဉ်း တဲ့စောက်ခေါင်း..ညှပ်ရိုးကြွက်သားတွေ နဲ့တင်းကျပ်နေလို့..စောက်ရည်တွေရွှဲအိ နေပါလျက်နဲ့တောင်မှလဒစ်ကြီးဝင်သွား အောင်မနည်းချော့ပြီးထိုးသွင်းခဲ့ရတယ်။ကုတင်စောင်းမှာ သူ့ဖင်ဆုံကြီးနှစ်လုံးကို တေ့တင်လိုးတော့ အော်လိုက်တဲ့အသံ.. လမ်းကတောင်ကြားသွားမှာစိုးလို့ပါးစပ် ကိုလက်ဝါးနဲ့လှမ်းပိတ်ပြီးမှလိုးခဲ့ရပါရော လား။အခုတော့လည်း..သူမဟုတ်သလိုပဲ မြုံစ် မြုံစိနဲ့စောက်ခေါင်းကလီးတန်ကြီးကိုတစ်မြေ့မြေ့ စုပ်ရင်းနဲ့စကားပြောနေ ပြန်ရော.စုပ်အားသန်ချက်ကလီးကြီးတစ် ချောင်းလုံးကျပ်သပ်ဆွဲစိခံနေရပြီးလရည် တောင်ပန်းထုတ်ချင်စိတ် ခဏခဏဖြစ်ရ တယ်။မိန်းမတွေများ အမျိုးမျိုးချည့်ပါပဲ လားနော် ။ သူ့တပ်ရင်းမှူးကတော်ကြီးနာမည်က ဒေါ်ကျော့ကျော့မြိုင်။ငယ်နာမည်အရင်း အမှန်က မကျင်းမေ တဲ့..သွေးနှောပါပဲ ။ အဖေကတစ်နယ်လုံးမှာရှိသမျှ အရက်. ဘိန်းခန်း.သားသတ်.အပေါင်ဆိုင် အား လုံးကိုလိုင်စင်ဆွဲပြီးစီးပွားရေးသမားစစ် ကြီးဆိုတော့ချမ်းသာချက်ကလွန်တယ်။ ရွှေမှုံစားပြီးမွေးလာတာဆိုတော့အလှအ ပကိုစာဖွဲ့မပြတော့ပါဘူး.အတွက်အချက် ပေသီးခေါက်တာကျွမ်းလွန်းတဲ့ သူ့အဖေကသူ့အသက်ဆယ့်ရှစ်နှစ်မပြည့်တပြည့် မှာစစ်ဗိုလ်ပေါက်စလေးနဲ့ပေးစားပြီးတစ် မိသားစုလုံးဗမာဖြစ်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း နှစ် ဆယ်လောက်ရှိပြီ။
ပြောချင်တာက ဒေါ်ကျော့ကျော့မြိုင် ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးက သူ့မျိုးရိုးဇာတိ သဘာဝအတိုင်း အလွန်နှာကြီးပြီးသွေး သားကကောင်းလွန်းတာနဲ့အညီ လီးနဲ့ စောက်ပတ်မပြတ်အလိုးခံနေမှသွေးလေ လည်ပတ်မှုမှန်တယ်ဆိုတဲ့မိန်းမမျိုးပါ။လင်ဖြစ်တဲ့သူကစစ်ရေးမှာကျွမ်းပေမယ့် အိမ်ထောင်ရေးနဲ့လိုးရေးမှာကမကျွမ်းဘူး။ကလေးကလည်းမရ.ရာထူးအတက် မြန်ပြီးအာဏာနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကများလာ..အိမ်ထောင်သက်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဒီမိန်းမကိုချည့်ပဲလိုးနေရတာလည်းအတော်ကြီးငြီးငွေ့နေပြီ။တစ်ရက်တစ်ချီလည်းမလိုး..နှစ်ရက်တစ်ချီလည်းမလိုး. သူလီးတောင်လေသမျှ သူ့တပည့်တွေရဲ့ မိန်းမတွေနဲ့အပြင်မှာချည့်ဖန်ပြီးလိုးနေခဲ့ တာကြာလှပေါ့။စော်ကြီးကလင်ငယ်နဲ့ခံ တော့ခံပါရဲ့..လင်ရဲ့အခြွေအရံအသိုင်းအ ဝိုင်းကကြီးတော့ မရိပ်မိကြရလေအောင် တစ်ပါတ်မှတစ်နေ့ခင်း..ဆယ်ရက်မှတစ် နေ့ခင်း..အဲဒီလောက်ပဲခိုးခံနေရတာကို အာသီသ ဘယ်လိုမှမပြေနိုင်ရှာဘူး။ ပြောရင်းလိုးရင်..သူကပြော မင်းမင်းကဆောင့်..ဒီအပိုင်းလောက်ရောက်လာ တော့ ဆောင့်ချက်ကပြင်းချင်လာပြီ။ဖိဖိ လိုးချက်က တင်းနေပြီ။ဆောင့်ချက်ပြင်း လေတော့ စကားပြောရင်းတစ်ဟင့်ဟင့် တစ်အင့်အင့်နဲ့ ရင်ခေါင်းထဲကလေတွေ လျှံထွက်အံထွက်သံကမြန်လာပြီ။ ” အာ..မောင်ကကွာ..ဟင့်..နေဦးလို့. ဟင့်..စကားဆုံးမှလိုးလည်းရနေတာကို. အာ့ဟာ့..နေဦး ဆောင့်နဲ့ဦး..အင့် ခိခိ ” ပြောမနိုင် ဆိုမရ..လီးကြီးဆွဲဆွဲထုတ် ပြီး တစ်စွပ်စွပ် တစ်ပြွတ်ပြွတ်ဆောင့်လိုး နေတော့ အရသာကလည်းရှိ..စကားက လည်းပြောချင်..ရင်ပတ်ကိုလက်သီးဆုပ် လေးတွေနဲ့မနာအောင်တစ်ဖတ်ဖတ် ထု နေမိတော့တာပေါ့။လီးတစ်ချောင်းလုံး ဆွဲထုတ်လိုးတာမဟုတ်ပေမယ့်..လီးတစ် ဝက်လောက်ပဲဆွဲထုတ်လိုးပေးနေရုံလေးနဲ့တောင်မော်မော့်မှာအရသာရှိလှပြီ။လိုး ပါနဲ့ဦး ဆောင့်ပါနဲ့ဦးလို့ပါးစပ်ကဘယ်လို ပြောနေနေ..စောက်ခေါင်းထဲလီးအဝင် အထွက်ကောင်းအောင်လို့ ပေါင်ကြီးတွေ ကားကားကြီးဆွဲမြှင့်ပေးရင်း ဖင်ကြီးချွ ချွ ပေးနေပြီ။ ” တအားကောင်းတာပဲနော်..မောင်. ဟင့်ဟင့်..နေဦး..နေဦး..အဲဒီ ဒေါ်ကျော့ မြိုင်ကြီးကိုလိုးရမယ်ဆိုရင် မောင်လိုးမလား လို့..အာ့ဟာ့..အင့် ” အံ့ဩသွားလို့ဆောင့်ချက်ကိုခဏရပ် ပြီးမော်မော့်မျက်နှာပေါ်ငေးကြည့်နေမိတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး ” ဒီနေ့ လေဆိပ်မှာသူ့ယောင်္ကျားက မော့်ကိုခွင်လာဖန်နေလို့လေ..မောင်က မကျော့ကိုလိုးပေးလိုက်ပြီး ဒေါ်လေးက သူ့လင်နဲ့ကုန်းကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းမ လား တွေးမိလို့..ဖျန်း..ဖျန်း.” စကားတောင်မဆုံးသေးဘူး.ပါးကိုနှစ် ချက်ဆင့်အရိုက်ခံလိုက်ရပြီး မျက်နှာကြီး နဲရဲရဲနဲ့တစ်ဖျောင်းဖျောင်း တစ်ဖုံးဖုံးဆင့် လိုးတာခံလိုက်ရတယ်။ ” ငါလိုးမမိန်းမ..အင့်..ဘယ်သူနဲ့မှမခံရဘူး..ရော့..ငါပဲလိုးမှာ..အင့်.ငါပဲ.ရော့. ငါပဲလိုးမှာ..အင့် အင့် အင့်..ဖာသည်မ.. ရော့..အင့်. ” အလိုး ကြမ်းချက်က အချက်တစ်ရာ ကျော်ဆောင့်ပြီးလည်းမရပ်..အချက်တစ် ရာ့ငါးဆယ်လောက်ပစ်ဆောင့်လိုးပြီးလို့ လည်းမရပ်.ပါးတွေရိုက်ရိုက်ပြီးမဲ့တဲ့တဲ့ နဲ့ အံကြီးကြိတ်ပြီးပစ်လိုးတာသိပ်အရသာရှိ တာပဲ။
ပါးရိုက်ရုံနဲ့အားမရတော့ နို့တွေပါ ရိုက်ပြီးလိုးပြန်ရော။တစ်ဖျောင်းဖျောင်း တစ်ဖုန်းဖုန်း တစ်ပြွတ်ပြွတ် တစ်စွပ်စွပ်နဲ့ စောက်ရည်တွေကလည်းထွက်မှထွက်။ ” ဖင်ကုန်းစမ်း..ငါလိုးမ..ကုန်း ” စောက်ခောင်းထဲကသူ့လီးချွတ်လို့ချွတ် ပြီးချင်း မော်မော်လှိမ့်ထွက်ပြီးဒူးထောက် တစ်တောင်ဆစ်ထောက်လို့ ခါးညွှတ်ပြီး ဖင်ကော့တင်ပေးထားပစ်လိုက်တယ်။ ဘာတစ်ချက်မှဆွမနေပဲ ဖင်နှစ်လုံးကိုသူ့ လက်တွေနဲ့ဖိချလို့ အဝေးကနေလီးကြီးကိုစောက်ခေါင်းထဲတန်းဝင်လာအောင် ပစ်ဆောင့်လိုးထဲ့တာ..ပထမတစ်ချက်က ခါးကုန်းတက်သွားအောင်ခံလိုက်ရပေမဲ့ နောက်ပိုင်းတော့သူ့တင်ပါးကြီးနောက် ပြန်ဆွဲဆွဲပြီးပြန်ဆောင့်လိုးပစ်တာပဲ။သူ ကလည်းဖင်ဆုံကြီးတွေ အဆက်မပြတ် ရိုက်ရိုက်ပြီး ပစ်ပစ်လိုးတယ်။အားမရနိုင် လွန်းလို့ကိုယ်ကိုဝပ်ချလိုက်ပြီးဖင်ထောင် ပေးပစ်ရင်း ” ရိုက်..ရိုက်.ငါကတော့ ကုန်းမှာပဲ.. ရိုက်..အာ့..ငါ့စောက်ပတ်နဲ့ငါကုန်းတာ. အားဟာ့..ရိုက်..လိုး လိုး အိုးဟိုး..ပြီးပြီ ဟဲ့..ငါပြီးပြီ..ပြီးပြီဟဲ့..အားဟား..ယား. လီးရည်တွေကလည်းများလှချည့်လား မောင်ရယ်..အာ့ အာ့ အား..ထည့် ထည့် ကောင်းလိုက်တာ..သုံးချက်လောက်ပစ် ဆောင့်လိုးပေးပါဦးမောင်..အင့် အင့် ” နှစ်လသုံးလလောက်ကြီးတောင်မှဟို ငနာကနေ့တိုင်းလာလာလိုးထားလို့လား မသိဘူး..မေမေ့ပုံစံကတော်တော်ရွဲနေပြီ ဆိုတာပြည့်စုံသတိထားနေမိတယ်။နို့လုံး ကြီးတွေအိတွဲတွဲနဲ့ဖင်လုံးသားဖူးမို့မို့ကြီး တွေကဗျဲလျမ်းကြီးပါးသွားပြီးရွဲ့ ရွဲ့ပြေးနေ ကြပြီဆိုတော့မသိချင်လိုလည်းမရတော့ဘူးလေ။အဲဒီကောင်ကလည်းလွန်လွန်းပါတယ်.ကျောင်းသွားသလိုလိုနဲ့နေ့တိုင်း မနက်စောစောလာခေါ်.ညနေဆိုနောက် ကျမှသူ့အိမ်ပြန်..တစ်ခါတစ်လေညအိပ် ညနေများတောင်လိုးပစ်လိုက်သေးတော့ရွဲတော့မှာပဲပေါ့လေ.စောက်ဖုတ်ကြီးများ ဆိုဘယ်လောက်ထိပွင့်အာနေမယ်မသိ။ မီးဖိုထဲမှာအမေချက်ပြုတ်သွားလာ လှုပ် ရှားနေတာကိုထိုင်ငေးကြည့်နေရင်းပြည့်စုံအတွေးတွေကဟိုရောက်ဒီရောက်ပေါ့။ အမေ့စောက်ဖုတ်ကြီးအကြောင်းအတွေး ရောက်သွားပြန်တော့အမေ့စောက်ခေါင်း ကြီးထဲကို မင်းမင်းလီးကြီးနဲ့ဆောင့်သွင်း လိုးချက်တွေမျက်စေ့ထဲအလိုလိုပြန်မြင် ယောင်လာပြီးသူ့အာခေါင်ထဲကခြောက် သွေ့လာတယ်။လီးချောင်းကလည်း မာတင်းတင်းဖြစ်နေပြန်တော့ပုဆိုးအောက် မှာလှုပ်စိလှုပ်စိနဲ့ခေါင်းထောင်လာတယ်။ အိဖြူပုံစံက ရွဲ့ နေသလိုလိုနဲ့ရွဲ..ရွဲသလိုနဲ့ ရွဲ့ တဲ့ပုံဆိုတော့ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် လိုး ချင်စရာကောင်းနေတုန်းပဲကိုး.. ” ခိခိ..မဖြူဖင်ကြီးလိုက်ကြည့်နေပြီး. ကိုပြည့်လီးကအငြိမ်မနေဘူးတော့်..သား အမိချင်းစိတ်လာနေလားမသိဘူး..ဟီဟိ ပျော်စရာရီး ” ဒေါ်သဲမာက တိုးတိုးကပ်ပြောပြတော့ အိဖြူကဟင်းအိုးပြင်နေရင်းမျက်စေ့တစ် ချက်စွေကြည့်တယ်။လှုပ်တုပ်လှုပ်တုပ်နဲ့ ငေါ့ငေါ့တက်နေတဲ့လီးကိုမြင်တော့သဲမာ ဖင်ကြီးကိုရှက်ရှက်နဲ့ဆွဲဆိတ်ရင်း ” ခိခိ.ဒီဖင်ကြီးကြည့်ပြီးသူ့လီးတောင် နေတာဖြစ်မှာ..ခိခိ..ခံသာခံပြိုက် ဟီဟီး. သိပ်မကြီးဘူး မကြောက်နဲ့..ခိခိ ” ဒေါ်သဲမာကလည်းအထ,သိပ်သေး တာမဟုတ်ဘူး။
ဒီအိမ်မရောက်ခင်ကသူ လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အိမ်တိုင်းမှာအိမ်ရှင်ကိုကိုကြီး တွေနဲ့ပလူးပြီးအလိုးခံခဲ့ဖူးတာချည့်ပဲ။ ” ဟွန့်..ကိုပြည့်မျက်လုံးက သူ့အမေ ဖင်ကြီးတွေနဲ့ကပ်လိုက်နေတာနော့..သဲ တို့က ဒီအထာမျိုးဆိုကျွမ်းပြီးသား..ခ်ခ်.. လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အိမ်တိုင်းမှာတွေ့နေကျ ” ” အဟုတ်လား ” ” အိုး..အဟုတ်ပေါ့..အမေနဲ့သား လိုး နေတာကြုံပေါင်းများလို့ ရိုးနေပြီ..ခိခိ ” အိဖြူပုံစံကြည့်ရတာ ဝေခွဲမရတဲ့ပုံမျိုး ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။တကယ်တော့အိ ဖြူကမင်းမင်းနဲ့အလိုးခံနေတာကို ပြည့်စုံ မြင်သွားပြီးကတည်းကနှုတ်ပိတ်တဲ့အနေ နဲ့အလိုးခံဖို့စိတ်ကူးခဲ့ပေမယ့်..ခွင်မတည့် သေးလို့ကြည့်နေတာ။ ” လုပ်သာလုပ်ပစ်လိုက်မဖြူ…ပြီးရင် သာ သဲမာကိုမမေ့နဲ့ ခ်ခ်..ဒီကလဲဆာနေ တာ..ဟီဟိ.အိမ်သားတွေမရှိတုန်းသဲမာ ရှောင်ပေးမယ် ” ” အိုး..သူသိရဲ့သားနဲ့..ဒီကဗိုက်ကြီး နေတာ သုံးလထဲတောင်ဝင်နေပြီ..ခိခိ.. ဒေါ်သဲမာ ခံလိုက် ဟီဟိ ” ” ဒီအချိန်က ပိုအလိုးခံလို့ကောင်းတာ ပေါ့မဖြူရဲ့..ခ်ခ်..ဆီးခုံသားမို့တက်နေပြီး စောက်ခေါင်းကိုလီးလမ်းကြောင်းဖွင့်ပေး ထားတာ..ဟီးဟီး..စေးစေးပိုင်ပိုင်ကြီး ခံ လိုကောင်းမှကောင်း..လစ်ပြီ ဒါပဲ ခိခိ ” ဒေါ်သဲမာကစကားဆုံးတော့ အိုးခွက် ပန်းကန်တွေဇလုံကြီးထဲထည့်ပြီးရေကန် ဖက်ထွက်ချသွားတယ်။အိဖြူကစိတ်ငြိမ် အောင်ခဏထိန်းပြီး နို့ လုံးကြီးတွေပြူးဟ,ပွင့်နေအောင်ဘလောက်စ်အင်္ကျီရဲ့အ နားကိုဆွဲစန့်လို့ ပြည့်စုံနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင် စားပွဲအခြမ်းမှာသွားရပ်တယ်။သူစားပြီး သားပန်းကန်ကိုဆေးဖို့သိမ်းယူသလိုလိုနဲ့ကိုယ်အထက်ပိုင်းကိုကုန်းညွှတ်လိုက် တော့ ဘရာစီယာဝတ်မထားတဲ့နို့လုံးကြီး တွေက အိကနဲ့တွဲကျနေတာကိုသူ့အင်္ကျီ လည်ဟိုက်ကြားကပြည့်စုံကြည့်နေမယ် ဆိုတာသူသိတယ်လေ။လက်ထဲကဇွန်းနဲ့ခက်ရင်းကိုတမင်ဘေးချော်ချလိုက်ပြီးခပ် ကြာကြာလေး ဟိုစမ်းဒီစမ်းနဲ့လုပ်ပြလိုက် တော့ ပြည့်စုံမနေနိုင်တော့ဘူး။သူ့အမေ လက်မောင်းသားအိအိကြီးတွေကိုထိထိမိမိကြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း နို့ ကြီးတွေ့ကိုပြူးကြည့်နေတယ်။အိဖြူက လက်ဝားလေးတစ်ဖက်နဲ့ပြည့်စုံ မျက် လုံးကြီးတွေရှေ့တစ်ချက်နှစ်ချက်ဝေ့ရမ်း လိုက်ပြီး နှာခေါင်းတစ်ချက်ဆွဲလိမ်ရင်း ” အွန်း..ခိခိ..ဘာလဲ..တအားမကြည့် နဲ့ကွာ..မဖူးနို့ နဲ့မာမီ့နို့.. အလုံးချင်းတူတူပဲလား..ခိခိ..ဘယ်သူ့နို့ ပိုအိလဲ ” ပြည့်စုံကဘာမှပြန်မပြောနိုင်သေးပေ မယ့်..လက်မောင်းတွေကိုဆုပ်ထားမိတဲ့ သူ့လက်က ပိုတင်းကျပ်လာပြီ။သူနဲ့ဖူးအိ လိုးနေကြတာကို အမေသိနေပာလျက်နဲ့ဘာမှမဆူ ဘာမှမပြောခဲ့ပါလား လို့တွေး မိလိုက်တော့အမေ့ကိုပိုလိုးချင် ပိုလိုးရဲမိ လာတယ်။ပြတင်းဝ,ကချောင်းကြည့်နေတဲ့ဒေါ်သဲမာခမျှာမှာလည်းသူ့ဟင်းအိုးတူးတော့မှာစိုးလို့မြန်မြန်ဆွဲခေါ်သွားစေချင်လှပြီ။ ” ဒီနားမှာပြောရခက်နေရင်.လာ မာမီတို့အိပ်ခန်းကိုလိုက်ခဲ့..ဟိုရောက်မှအင်္ကျီ ချွတ်ကြည့်ပြီးပြော..ခိခိ..အစ်မကိုလိုးနေ တဲ့ ကြောင်သူတော်လေး..ခ်ခ် ” အိဖြူကပြည့်စုံလက်တွေကိုဖြုတ်ဆွဲပြီ ဆိုတော့ ဒေါ်သဲမာကမီးဖိုထဲကိုခြေဖွနင်း ပြီးပြန်ဝင်လာတယ်။ပြည့်စုံလက်ကိုဆွဲပြီး ထွက်လို့တံခါးဝ,လည်းရောက်ရောသဲမာမီးဖိုပေါ်ကဟင်းအိုးကြီးချပြီး လက်ကွင်းထိုးပြနေတာကိုမျက်ဝန်းထောင့်ကမြင်မိ လို့ မသိမသာလေးခေါင်းညိတ်ပြခဲ့လိုက် တာပေါ့။သူတို့လင်မယားအိပ်တဲ့အခန်း ထဲရောက်တော့ တံခါးကိုစေ့ထားမိတာနဲ့ ပြည့်စုံဆွဲပိတ်ဖို့ဟန်ပြင်တယ်. ” နေပါစေ သားရယ်..တစ်အိမ်လုံးမှ မာမီတို့သားအမိနှစ်ယောက်ထဲရှိတာပါ.. သူတို့သားအဖညနေရုံးဆင်းချိန်လောက် မှပြန်လာမှာ..ခိခိ မင်းမင်းလည်းဒီနေ့ သူ့ အဒေါ်နေမကောင်းလို့တဲ့ လာမှာမဟုတ် ဘူး..သား စိတ်ကြိုက်ပဲ..ခ်ခ် ” ပြောရင်းနဲ့ ဝတ်ထားတဲ့ဘလောက်စ် ကိုခေါင်းပေါ်ပင့်ချွတ်ပစ်တော့ ဗိုက်ကြီးခါ စ,အသားတက်နေတဲ့နို့လုံးလှလှ အိအိ ကြီးတွေက ဖွေးကနဲပြိုကျလာတယ်။ ” မာမီရာ.အားဟားယား..ကျွတ်ကျွတ် ဖွေးအိပြူးတက်နေတာပဲ..လုံးလုံးခဲခဲကြီး ပါလား နော် ” ပြောရင်းနဲ့ရှေ့ကိုတိုးလာတော့ ပြည့်စုံ လက်ကိုဆွဲယူပြီးသူ့နို့ လုံးကြီးတွေပေါ်ဖိ တင်ပေးလိုက်ရင်းပုခုံးကိုသိုင်းဖက်ပစ်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေထဲလျှာထိုးသွင်းလို့နမ်းစုပ် ပစ်လိုက်တယ်။နမ်းနေရင်းနဲ့လှမ်းကြည့်မိတော့ဒေါ်သဲမာချောင်းကြည့်နေတာကို မြင်ရတာနဲ့ လက်ကွင်းပြန်ထိုးပြီးလေးငါး ချက်ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ပြလိုက်တယ်။
” ဟင့် ဟင့်. အားရပါးရနယ်ကွာ..စို့. စို့ပေး..စို့လို့အာရရင် သားအဖေလိုးတဲ့ကုတင်ပေါ်မှာဟောဒီမာမီ့စောက်ပတ် ဖောင်းဖောင်းကြီးကိုလိုး. ” မာမီ့နို့ လုံးကြီးတွေက လက်နဲ့ဆုပ်လို့် မနိုင်ဘူး။အကြီးကြီးနဲ့အိအိကြီး ခဲနေတာ ဆိုတော့လက်ဆုပ်ထဲကလျှံထွက်နေတာ ပြူး ကားနေတာပဲ။နို့ သီးခေါင်းမာမာခဲခဲ လေးတွေကလဲလက်ဖဝါးပြင်ကိုခွာလိုက် ထိလိုက် လာလာဆော့နေသလိုပဲ။မာမီ က သူ့နို့ လုံးကြီးတစ်လုံးကိုလက်နဲ့ပင့်မ, ပြီးပါးစပ်ထဲထိုးထဲ့ပေးတော့ ပါးစပ်နဲ့အ ပြည့်ငုံစို့ပစ်မိတာ အသက်တောင်မရှူနိုင် ဘူး။ပလွတ် ပြွတ် ပု ပလွတ် ပြွတ်နဲ့အသံ တွေဆူညံနေလေလေ..လီးကမတ်မတ် ကြီးတောင်လေလေနဲ့မာမီ့ဆီးခုံကို ဖိထိုး ပြီးထောက်နေပြီ။ခဏလေးနေတော့နို့ စို့ ခံနေရာကခေါင်းကိုဆွဲပင့်ယူပြီးနှုတ်ခမ်းချင်းကိုအငမ်းမရဆွဲစုပ်ပြန်ရော။မာမီက လျှာချင်းပူးနေအောင်ထိုးထဲ့လှိမ့်လူးရင်းတစ်ပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပေးနေတာကအရသာ ရှိလွန်းလို့ဘာစကားမှလည်းမပြောချင် မ ပြောနိုင်တော့ဘူး။ဒါပေမယ့် လီးကမာမီ့ ဆီးခုံကိုလား.ဝမ်းပျဉ်းသားကိုလားမသိပါ ဘူး..ထိုးထိုးထောက်နေတော့အနေခက် တာနဲ့ ဖင်ကိုဟိုလူးဒီလူးလုပ်ပြီးလီးထားဖို့နေရာရှာကြည့်တယ်။မာမီကသိနေသ လိုပဲ.ပေါင်ကြီးတွေချဲလိုက်ပြီးသူ့လက်အ ဖျားလေးတွေနဲ့လီးကိုဖိဖိချသွားရင်းနဲ့သူ့ စောက်ပတ်ခွင်ထဲမှာလီးကိုနေရာချထား ပေးတယ်။ပုဆိုးနဲ့ထမီကြီးတွေခံနေပြန် တော့ ထိဖိမိမိမရှိပြန်ဘူးလေ..ဖင်ရမ်းရ ပြန်တာပေါ့။ဒါလည်း မာမီကသိတာပဲ.. ပြည့်စုံပုဆိုးကိုအရင်ဆွဲဖြည်ချွတ်ပေးပြီး သူ့ထမီကိုနောက်မှချွတ်တာ။ဒီတော့မှပဲ လီးကမာမီ့စောက်ပတ်ခွင်ထဲမှာနေရာရ ပြီး မာမီကပေါင်လုံးကြီးတွေနဲ့ညှပ်ထား ပေးတယ်။စောက်ပတ်သားနူးနူးညံ့ညံ့ ပူ ပူနွေးနွေး စိုစိုရွှဲရွှဲကြီးတွေ.စောက်မွှေးမွမွ ခပ်ယွယွလေးတွေနဲ့လီးဒစ်အသားနုနုက ထိုးမိပွတ်မိနေတော့ လီးတစ်ချောင်းလုံး တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်လာတယ်။အဲဒါနဲ့ပဲ မာမီပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲညှပ်နေတဲ့လီးကိုတစ်ဆတ်ဆတ်ညှောင့်ထိုးနေရင်းပါး စပ်ထဲကလျှာနဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုအတင်း ဆွဲချွတ်ပြီး ” ဟင့် အင့်..မာမီ..မရတော့ဘူး သား လီးတစ်ဆတ်ဆတ်တုန်နေပြီ..မရတော့ ဘူး..လိုးမယ်..လိုးမယ်..မာမီ့စောက်ပတ် ကြီးကို လိုးတော့မယ် ” မာမီက ချက်ချင်းပဲ ကုတင်ပေါ်တက် ပြီးပက်လက်လှန်ပေးတော့ မဖူးကိုလိုးခဲ့ ဖူးတဲ့အတိုင်းပဲပေါင်နှစ်လုံးကြားမှာဒူးချ ထိုင်ပြီးလိုးဖို့ပြင်တာပေါ့။မာမီကသူ့ပေါင် ကြီးနှစ်လုံးကိုပြည့်စုံပေါင်တွေပေါ်ပစ်ခွ တင်ရင်းဖင်ဆုံကြီးရွေ့ကာရွေ့ကာနဲ့ခွင်ချ ပြင်ပေးနေတုန်းသူ့ဒူးတွေကိုအပေါ်တွန်းထိုးတင်ပစ်လိုက်တယ်။စောက်ဖုတ်ကြီး ကြွတက်လာပြီးလီးဒစ်ကစောက်ပတ်အ ကွဲကြောင်းကိုချော်ချော်ပြီးထိုးနေပြီဆိုမှ မာမီကလီးကိုကိုင်ပြီးစောက်ခေါင်းဝ,မှာ လဒစ်ဖျားတေ့ထားပေးတယ်လေ။ ” ဖြည်းဖြည်းထိုးထဲ့နော် သား..မာမီ့ စောက်ခေါင်းကကျဉ်းကျဉ်းလေးရယ်.ပြဲ ကွဲသွားမှာစိုးလို့..ဖြည်းဖြည်း အင့် ” ဒူးနှစ်လုံးကိုလက်နဲ့တွန်းပြီးဖင်ကိုချွ ချွ ထိုးသွင်းတော့လီးကပူနွေးစိုအိနေတဲ့ မာမီ့စောက်ခေါင်းထဲကို အရင်းထိစုံးစုံးမြုပ် ဝင်သွားတယ်။ ” အာ့..ဖြည်းဖြည်းနော် သား..လီးကို တစ်ဝက်လောက်ပဲဆွဲထုတ်ပြီးဖွဖွ လိုး.. အင်း..အင်း..အဲလိုလေး.ဟုတ်ပြီ..အဲလို အကြာကြီးလိုးနော်..ကောင်းလားသား ” ပြည့်စုံက ဖူးအိနဲ့လိုးလာတာကြာပြီဆိုတော့ တော်ရုံသင့်ရုံလောက်ထိန်းနိုင် ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အခုလိုးနေရတာက ကိုယ့်အမေဖြစ်နေပြီး.စောက်ဖုတ်ကြီးကလည်းမလိုးပဲမြင်လိုက်ရရုံနဲ့တောင်မှလီး ရည်ပန်းထွက်သွားလောက်အောက်ဆွဲ ဆောင်အားကောင်းလွန်းတဲ့စောက်ဖုတ် ကြီးဖြစ်နေတော့ အချက်လေးငါးဆယ် တစ်ရာ ဆောင့်လိုက်တာနဲ့ဇောကသန် လာပြီ။စောက်ဖုတ်ကလည်းလိုးခါစ,က စောက်ရည်မရွှဲသေးပေမယ့် လီးဝင်သွား ပြီး လေးငါးချက်ဆောင့်လိုက်တာနဲ့ဂွေးဥ တွေပါစိုရွှဲသွားတဲ့အထိ ရွှဲရွှဲကြီးထွက်လာ ပြီ။ဆောင့်လိုက်တိုင်း ပေါက်ပေါက် ပြွတ် ပြွတ် ပလောက်ပေါက်ပြွတ်နဲ့အသံတွေ မြိုင်မြီုင်ကြီးထွက်လာပြီဆိုတော့ထိန်းလို့ မနိုင် သိမ်းလိုမရ..အရသာကတအားရှိ နေပြီ။
မာမီက ဖင်ကြီးတစ်ချက်ပင့်ပေးရုံ ပဲရှိသေးတယ်..လီးကိုအရင်းထိပစ်သွင်း လိုက်မိပြီး ” အားဟား..မရတော့ဘူး မာမီ..အာ့ အရမ်းကောင်းတယ်..အရမ်းကောင်း.. အားဟား..အားဟား.အရမ်းကောင်းတာ မာမီရေ..သွားပြီ..သွားပြီ..အားဟားယား ထွက်..ထွက်..ထွက် ကုန်ပြီ..အူးဟူး.မာ. မာမီရေ..အင့် ” လီးရည်တွေပန်းထည့်ပြီးသူ့ကိုပေါ်မှာ မှောက်လျက်ကြီးထပ်နေတော့ အိဖြူက ကျောပြင်လေးပွတ်သပ်ပေးနေရင်းဖက် ထားတယ်။လီးရည်တွေပန်းထည့်ပြီးပေ မယ့် လီးကိုဆွဲမထုတ်ဝေးပဲ တစ်ချက်ဖိ ဆောင့်လိုက် ငြိမ်နေလိုက်.. နောက်တစ် ချက်ဖိဆောင့်လိုက် ငြိမ်နေလိုက်နဲ့ လေး ငါးချီလောက်လီးရည်စစ်ထည့်နေသေးတယ်။ဒါပေမယ့် လီးကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ လျော့လိုက်လာပြီးစောက်ပတ်ကအားမ လိုအားမရနဲ့တစ်ချက်ညှစ်စုပ်လိုက်တော့ ပလွတ်ဆိုထွက်သွားတယ်။လီးတန်တစ် ချောင်းလုံးမှာစောက်ရည်တွေ.လီးရည် တွေနဲ့ရွှဲနေသလိုမာမီ့ပေါင်ကြားမှာလည်း လီးထဲကတစ်စိမ့်စိမ့်ထွက်နေတော့ ရွှဲနစ် နေတာပဲ။ ” ကောင်းလား မာမီ ” ပြည့်စုံကအာခောင်ခြောက်နေတဲ့လည် ချောင်းသံနဲ့မေးတော့ အိဖြူကတိုးတိုးပဲ ” အင်းဟင်း..ကောင်းတာပေါ့သားရာ ဟင်းဟင်း..စောက်ပတ်ထဲလီးဝင်နေရင် အကုန်ကောင်းပဲ..သားရော..ကောင်းရဲ့ လား..မာမီ့ စောက်ခေါင်းကကျယ်နေပြီ လား ” ” သိပ်လိုးလို့ကောင်းတာပဲ မာမီ..ထပ် လိုးချင်သေးတယ်..ဝ,သေးဘူး ” ” ဟင့် ဟင့်..လိုးပါရှင်..လိုးပါ..ခိခိ.. တစ်နေကုန်လိုး..လီးကြီးစောက်ဖုတ်ထဲ ထည့်ထားပြီးတစ်နေကုန် စိမ်လိုး..ခိခိ.ဒါ ပဲနော်..မင်းမင်းလာရင်တော့ မသိသလို နေရမယ် ဆရာ..ခိခိ. သားအမိချင်းလိုး နေကြတာကို သူသိလို့မဖြစ်ဘူး.ဟွန့် ” ပြည့်စုံကမျက်နှာညိုသွားပေမယ့်မာမီ ပြောတာကသဘာဝကျနေတော့ မငြင်းပါဘူး. ” အင်းပါ မာမီရယ်.သားနားလည်ပါ တယ်…မာမီ့လင်နဲ့လည်းမာမီလိုး သားကိုလည်းပေးလိုးပေါ့…အင် အဲဗျား.. ဒေါ်သဲမာကြီး ” မာမီ့ပေါ်မှာမှောက်ပြီးလည်တိုင်ချင်း ယှက်လို့ စကားတိုးတိုးပြောနေကြရာက ခေါင်းမော့လိုက်တော့သဲမာကိုတွေ့တာနဲ့ လွှတ်ကနဲအသံထွက်သွားတယ်။သဲမာ က တံခါးဝမှာရပ်ကြည့်နေပြီးထမီပေါ်က နေသူ့စောက်ဖုတ်ကိုလက်နဲ့အုပ်နှိုက်ပြီး ပွတ်နေရင်း အကြည့်ချင်းဆုံတော့ပြုံးပြ တာပော့။ကြောက်အားလန့်အားမို့ပြည့်စုံ ကုတင်ပေါ်ကခုန်ဆင်းပြီးကြောင်တောင် တောင်ရပ်နေမိတယ်။သဲမာကအခန်းထဲဝင်လာပြီးအရည်တွေ ရွှဲစိုနေတဲ့ပြည့်စုံရဲ့ လီးကိုဆုပ်ကြည့်တယ်. ” ဟင်း ဟင်း.လီးကတော့ အစ်ကိုကြီး ကိုမြဝင်းလီးထက်တောင်ကြီးချင်သလား လို့..ခိခိ ” အန်တီကျော့ကျော့မြိုင်ဆိုတဲ့ခပ်ချော ချော ခပ်တောင့်တောင့် တရုတ်မကြီးက အိမ်ကိုခဏခဏအလည်လာနေတော့ သင်းသင်းစိတ်ထဲမသင်္ကာချင်တော့ဘူး။
လာပြန်တော့လည်းဒေါ်လေးမော်မော်နဲ့ အခန်းထဲမှာတွတ်ထိုးနေကြတာက တစ် ခိခိ တစ်ခစ်ခစ်နဲ့မြီးကောင်ပေါက်တွေက အရှုံးပေးရမလောက်ခပ်ယွယွ။အရပ် အ မောင်းကကောင်းရတဲ့အထဲမှာမှ.တောင့် လိုက်တဲ့ဖင်ကြီးတွေကကားကားကြီးနဲ့ဖူး ထ, ကောက်ချိတ်နေတော့သူ့ဖင်သူအမြဲ သ,နေတဲ့ဒေါ်လေးတောင်မှ အရှုံးပေးရ တော့မယ်ထင်တာပဲ။ပြောမယ့်သာပြောရတာပါ..ဒေါ်လေးဖင်ကလည်းမင်းမင်း လီးနဲ့နေ့တိုင်းနီးပားအလိုးခံနေရလွန်းလို့ ခပ်လျော့လျော့တော့ဖြစ်ချင်နေပါပြီ။ မင်းမင်းလီးကြီးချက်နဲ့အလိုးသန်ချက် တွေများသင်းသင်းတော့လက်လန်ပါရဲ့.. တကယ်ပါ။အဲဒီနေ့က ပပဝတီမှာအဖေမိသွားတော့မောင်နှစ်မချင်းနှစ်ယောက်အ တူထွက်ပြေးကြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကြပါမှ အဖေကသူ့အမှားသူသိသွားလို့အရက် မူးမူးနဲ့ပြန်ချော့တယ်လေ။သင်းသင်းကဒီ ညတော့မောင်နှစ်မထွက်ပြေးပြီးလိုးကြရ တော့မယ်လို့တွေးပြီးရင်ဖိုနေမိရုံပဲရှိသေး တယ်.အမေနဲ့မင်းမင်းတို့အဖေ့ကိုနံဘေး မှာထားပြီးလိုးလိုက်ကြတာများပက်စက် တယ်။တစ်ညလုံး ပက်လက် မှောက်ခုံ.. ဘေးစောင်း လေးဖက်ကုန်း ပုံစံအမျိုးမျိုး နဲ့လိုးနေကြတာ တံခားဖွင့်ပြီးသင်းသင်းလာချောင်းကြည့်တာတောင်မမြင်နိုင်ကြ တော့ဘူး။ကိုယ်အလိုးခံရတော့မှာပဲ လို့ ထင်ထားရာက လမ်းချော်သွားပြီးအမေ့ စောက်ပတ်ထဲကိုမှသူ့လီးကြီးဝင်အောင်းသွားတော့မကျေနပ်တာနဲ့မောင်လေးကို တစ်ရက်လောက်စိတ်ကောက်ပစ်လိုက် တာပေါ့။တစ်ရက်နဲ့တစ်ည အခန်းထဲမှာ အောင်းပြီးအတွေ့မခံပဲစိတ်ကောက်ပစ် လိုက်တော့ဘယ်နေနိုင်မလဲ.. အူလည် လည်နဲ့သူအခန်းထဲရောက်လာတာပေါ့. ” အခုမှ ဘာလာလုပ်ထာလဲ..သွား.. တော်ပြီ..ငါ နင်နဲ့မလိုက်တော့ဘူး..ထွက် လည်းမပြေးတော့ဘူး..အလိုးလည်းမခံ တော့ဘူး.. သွား ” မင်းမင်းကကုတင်ဘေးမှာလာကပ်ပြီး ထိုင်ရင်းပုခုံးကိုဖက်တော့သူ့လက်ကြီးက နို့ တစ်လုံးကိုဆုပ်မိနေပြီ။ ” ဟွန့် သွား သွား..အလိုလိုမှ ကြီးနေပါတယ်ဆိုမှ..တအားနယ်မနေနဲ့ သွား.. ဟွန်း..နင့်လက်အုပ်နဲ့တောင်မဆန့်ဘူးမလား..ကြည့် ကြည့်..တအားနယ်တာပဲ ” ” မမရာ..ငါ အဗျင်းခံပြီးနင့်ကိုချစ်တာနင်သိပာတယ်ဟာ.ငါနင့်ကိုတစ်ကယ်ချစ် တာပါ..” မောင်လေးကအဲလောက်ချော့တယ် ဆိုရုံနဲ့ သင်းသင်းကစိတ်ကောက်ပြေနေ ပြီ။တစ်ကယ်လည်းဟုတ်နေတော့ စိတ် ကသနားနေတာလေ..ကိုယ်အလိုးမခံခဲ့ လိုက်ရလို့သာစိတ်ကောက်ခဲ့တာကိုး..အ ခု အလိုးခံရတော့မယ်ဆိုတော့ကျေနပ်မိ သွားတာပေါ့.. ” ဟင့် အင့်..အင့်..အဲလိုရီးဆုပ်ဆုပ်မ နယ်နဲ့လေကွာ..နို့သီးခေါင်းလေးချေပေး မှပေါ့..ဟင့်ဟင့်.အင်း..ဟုတ်တယ်.အဲနို့ အကြိတ်လဲ ချေပေး..အိုး..” နို့သီးခေါင်းကိုလှိမ့်လှိမ့်ချေတော့မရိုးမရွနဲ့ စောက်ပတ်ထိအကြောကစိမ့် စိမ့် ပြီးလိုက်လာပြန်တယ်။စောက်ပတ်ကြီး ပွတ်ပေး ချေပေး နှိုက်ပေးရင်ကောင်းမှာ ပဲ လို့တမ်းတမ်းတတနဲ့ တောင့်တနေမိ တော့ သူ့လက်တစ်ဖက်ကိုပေါင်ကြားထဲ တင်ပေးလိုက်မိတာပေါ့။လက်ချောင်းဖျားတွေကစောက်ဖုတ်ပေါ်ယွစိယွစိပြေး တော့ အားမရဘူး..ပေါင်ကြီးနှစ်လုံးထပ် လိမ်ပစ်လိုက်ပြီးသူ့လက်ကိုစောက်ဖုတ်နဲ့ ပေါင်ရင်းအကြားမှာညှပ်ဖိထားပစ်လိုက် တယ်။
သူ့လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ကိုယ့်အင်္ကျီ ကိုချွတ်နေရတာသိပ်အဆင်ပြေပုံမရတာနဲ့ကိုယ်တိုင်ပဲအင်္ကျီရောဘရာစီယာကိုပါ ချွတ်ပေးလိုက်တော့ နို့ လုံးတင်းတင်းကြီး တွေပြူးထောင်ပြီးထွက်လာတယ်။နို့စက် ဝန်းကပန်းရင့်ရောင်ထက်အညိုဖက်ကို လုချင်နေပြီ အကြီးကြီးပဲ။ပောင်ကြီးတွေ ဇွတ်ဖြဲပြီးလက်တစ်ဖက်ကစောက်ဖုတ် ထဲအတင်းနှိုက်..လက်တစ်ဖက်ကနို့လုံး ကြီးလှိမ့်လှိမ့်ချေ..ယွလာတာစိတ်မထိန်း နိုင်တော့ဘူး။ဒါနဲ့ကုတင်ပေါ်ကန့်လန့်ပဲ ပက်လက်လှန်ချပစ်တော့ ဖင်လုံးကြီးခံ နေပေမယ့် ဆီးခုံကြီးကမို့တက်လာတာ တောင်ပူစာလေးလိုပဲ ခုံးခုံးလေး။ထမီအ ပေါ်ကနေ သူ့လက်ဖဝါးအုပ်ပြီးဆီးခုံပေါ် တင်ဆော့နေပြန်တော့ အလိုးခံချင်တာ စိတ်ထဲမှာကျလိကျလိနဲ့ဖြစ်နေပြီ။ဆီးခုံ ပေါ်ကနေ လက်ချောင်းလေးတွေဆင်းချ သွားပြီးစောက်စေ့ကိုလည်းဖိချေရောဖင် ကြီးကော့ကော့တွန်းတင်ပစ်ပြီး လက်က ထမီကိုဆွဲချွတ်ပေးပစ်မိတော့တာပဲ။ထမီ ကိုခြေထောက်တွေနဲ့ခါရမ်းချွတ်လွှင့်ပစ် ပြီးမှသူ့ကိုကြည့်မိတော့ပုဆိုးကဘယ်အ ချိန်ကချွတ်ပစ်လိုက်တယ်မသိဘူး..ခါးမှာ မရှိတော့ပဲသူ့လီးကြီးကမတ်မတ်ကော့ ကော့ကြီးတောင်လို့ငေါထွက်နေပြီ။သူကကုတင်အောက်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာရပ်ပြီး ပေါင်ကြီးတွေမြောက်တက်လာအောင် တစ်ခေါက်ကွေးကပင့်ယူမ,တင်နေတော့ သူ့မျက်နှာလက်နှစ်ဖက်နဲ့အုပ်ဆွဲယူလို့ မျက်လုံးချင်းဆိုင်ကြည့်ပစ်လိုက်တယ်။ ” မောင်လေး..မမတို့နှစ်ယောက်လင် မယားဖြစ်သွားပြီနော်…မိန်းမကိုလိုးပေးပါတော့ယောင်္ကျားရယ်.မောင့်လီးကြီးနဲ့ အားရပါးရ ဆောင့်ဆောင့်ပြီးမိန်းမကိုလိုးပေးပါတော့..” ” အပီ လိုးမယ်နော် ” ” အင်း.စုပ်ပြတ်ထွက်သွားအောင်လိုး ခပ်ကြမ်းကြမ်းကြီးသာလိုး..အသေလိုး ” စကားတောင်မဆုံးသေးဘူး..သင်းက ဒူးတွေကိုလက်နှစ်ဖက်ဆွဲထိန်းပြီးဖင်ကြီး ချွပေးလိုက်တော့သူ့လီးကြီးတစ်ဆုံးပဲထိုး ဝင်ချလာတယ်လေ။မောင်နှစ်မချင်းလင် မယားဖြစ်ရပြီ..အလိုးခံရပြီဆိုတဲ့အသိနဲ့ ကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေတဲ့ဇောတွေ ဖုံးလွှမ်း နေတော့ နာတာအောင့်တာတွေကိုဘာ တစ်ခုမှသတိမရမိနိုင်တော့ပါဘူး။သတိ ရတော့သူ့လီးကြီးက တစ်ဖုံးဖုံးတစ်ပြွတ် ပြွတ်နဲ့သင်းစောက်ပတ်ထဲမြန်မြန်ကြမ်း ကြမ်းကြီးအဆောင့်ခံနေရပြီ။သူအလိုး ကြမ်းလွန်းလို့သင်းသင်းကိုယ်ကြီးရွေ့ရွေ့ ပြေးနေတာနဲ့ ကုတင်ဘေးပေါင်တန်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲထားရတော့သူကခြေ ကျင်းဝတ်နှစ်ဖက်ကိုကိုင်တွန်းပြီးလိုးတာ လူးလှိမ့်နေအောင်အရသာတွေ့နေမိတာပဲမှတ်မိတော့တယ်။အတွေ့အကြုံမရှိပဲနဲ့ အရသာကြောမှာမျောပါသွားပြီးတစ်နာရီ ကျော်ကျော်ကြီးအလိုးခံပစ်လိုက်မိတာ. စောက်ဖုတ်ကြီးပြဲကွဲရောင်ကိုင်းပြီး တစ် ပတ်လောက်ကျပ်ပူတိုက်ခဲ့လိုက်ရပါရော လား။ အဲလိုအလိုးသန်လွန်းတဲ့သူဆိုတော့ ဒေါ်လေးမော်မော်ရွဲကျနေတာကိုမပြောနဲ့တော့ သင်းသင်းဘော်ဒီလည်းကလေးမအေရုပ်ပေါက်နေပြီထင်တာပဲ..နို့လုံး နို့ အုံတွေကြီးလာချက်ကဘရာစီယာဆိုသုံးဆယ့်ခြောက်ဆိုဒ်လောက်မှပဲဝတ်လို့အဆင်ပြေတော့တယ်.စောက်ခေါင်းဆိုတာ တော့ပြောမနေတော့ပာဘူး။အခုလည်းအိမ်ကိုဒီတရုတ်မဖင်ကားကြီးစက်ကျနေ ပြီဆိုတော့ မင်းမင်းများစိတ်ဆိုးနေလေမလား..သိပ်တော့မသင်္ကာဘူး။ ” မော်ရေ..လာဆွဲကူပါအုန်း.ကျော့တစ်ယောက်ထဲ မနိုင်လို့ ” အိမ်ရှေ့ကအော်ခေါ်သံကြားလို့ထွက် ကြည့်လိုက်တော့အန်တီကျော့ကိုအထုပ် တွေတန်းလန်းနဲ့တွေ့တယ်။
တစ်နှစ်တစ် ကြိမ်ကျင်းပတဲ့ ဟိုဖက်ကမ်းကရွာကြီးက ပွဲတော်ကိုတစ်အိမ်သားလုံးသွားနေကြ တော့ မင်းမင်းကဒီညအိမ်စောင့်ပေါ့။ရွာ ဆိုပေမယ့် မြစ်ခြားချောင်းခြားမို့သိပ်ကြီးမစည်ပင်လှလို့သာ ရွာဖြစ်နေတာပါ.တစ် ကယ်တော့ မြို့တစ်မြို့ နီနီးရှိပါတယ်။မြစ် ကူးချောင်းခြား..တံတားကမရှိလေတော့ မြို့ပေါ်နဲ့ရွာနီးချုပ်စပ်ပွဲသွားတဲ့သူတွေက နေ့ခင်းကတည်းက ကူးတို့လှေနဲ့ဟိုဖက် ကူးသွားကြတာ..ညနေဆိုရင်ကူးတို့လှေမကူးတော့ဘူး။ ” ဒေါ်လေးတို့ပွဲသွားတယ် အန်တီရဲ့.. ဟိုဖက်ကမ်းမှာနှစ်ညဆက်ကြည့်မယ်လို့ ပြောသွားတယ်..အန်တီ့ကိုမပြောခဲ့မိဘူး ထင်ပါရဲ့..လာ အန်တီ..သားသယ်ကူပေး မယ် အိမ်ထဲဝင်နား ” ” ဟောတော်..အန်တီနဲ့အတူသွားဖို့ ချိန်းထားကြတာ သားရဲ့..သူကသွားနှင့် ပြီဆိုတော့ အန်တီကဘယ်လိုလုပ်ရပါ့.. နိုက်ပတ်စ် တောင်နှစ်ညယူခဲ့တာ..တလွဲ တွေဖြစ်ကုန်ပါပြီ ” ” အဲဗျား..အန်တီလည်းခွင့်ယူရတာပဲလား..အင်းပါလေ..အထဲဝင်ပါဦး. အထဲမှာနားလိုက်ဦးအန်တီ ” အိမ်ခြံဝ,မှာချထားတဲ့သူ့အထုပ်အပိုး တွေနဲ့ပစ္စည်းအိတ်ကိုသွားယူကူတော့.နဲ နဲကြီးပြီးတစ်ခြားပစ္စည်းတွေထက်ပိုလေးပုံတူတဲ့ အိတ်ကိုရွေးဆွဲယူတာပေါ့။ ” အဲ..ဟဲတော့်.အဲအိတ်ကြီးမသယ်ပါ နဲ့မင်းမင်းရဲ့..ခိခိ..အထဲမှာမမ ဟိုပစ္စည်း တွေပါတယ်..ခ်ခ်..ထားလိုက် ထား ” ” အာ..ကျွန်တော်မသယ်လို့ ဘယ်သူ လာသယ်မှာလဲအန်တီရဲ့..ဘာပါပါ သယ် ရမှာပဲ..လာ ” ဇွတ်ဆွဲတော့ဒေါ်ကျော့ကျော့မြိုင်က မလွှဲမရှောင်သာလိုသာခွင့်ပြုရမှာ သိပ်မ လွှတ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်းလက် တွေဖြည်လျှော့ရင်း. ” ဟိုကွာ..ပင်တီတွေနဲ့မို့လို့. ဟို.အား နာတာကွာ..ခိခိ..လာခါနီးမှလဲဝတ်လာခဲ့ တာ.အနံ့တောင်ရချင်ရနေမှာ.ခိခိ ” ရှက်သလိုလိုနဲ့မခို့တစ်ရို့လုပ်ပြီးညည်းသလိုလိုမပွင့်တစ်ပွင့်ပြောရင်းမင်းမင်းကို ကြည့်နေတယ်။တကယ်တော့ မော်မော် က သူ့တူအကြောင်းအကုန်ပြောပြထားခဲ့ ပြီးသားမို့မင်းမင်းကစောက်ပတ်အနံ့ကိုခံ လိုက်ရရင် လီးကြီးမာတောင်ခေါက်လာ ပြီးစောက်ပတ်ကိုအတင်းယက်ပေးတတ် တယ်ဆိုတာ သူကသိနေပြီးသားပါ။အဲဒါ နဲ့ အခွင့်ကြုံတုန်းမော်မော်ပြောတာမှန်ပါ့ မလားလို့လက်တွေ့စမ်းကြည့်တဲ့သဘောပါပဲ။စောက်ပတ်အနံ့အကြောင်းလည်း ခုလိုကြားလိုက်ရော မင်းမင်းကိုယ်ကြီးက ဆတ်ကနဲတွန့်ခာသွားတာမြင်လိုက်တော့မှန်နေပြီပဲလို့တွေးပြီး ” လာကွ..နှစ်ယောက်အတူဆွဲသွားရ အောင်..အထဲရောက်မှ မမ ပြမယ်..ခိခိ. ဟိုဟာပြမှာနော်..ပင်တီ ပြမယ်ပြောတာ ခ်ခ်..ဟိုဟာတွေနဲ့ အကွက် အကွက်တွေ ဖြစ်နေလို့..ဒီအိမ်ရောက်မှရေချိုးရင်းနဲ့ပဲ လျှော်လိုက်မလားလို့ ခိခိ ” မင်းမင်းကမပေးဘူး။အိတ်ကိုပုခုံးပေါ် ထမ်းတင်ပြီးလျှောက်လာရင်းမအောင့်မ အီးနိုင်တဲ့လေသံနဲ့ ” ဘာတွေ အကွက် အကွက်ဖြစ်နေတာလဲဟင်.အန်တီ..ဟိုဟာ ဆိုတာက ” ” ခိခိ..ကောင်လေးကလဲ..ဟင်းဟင်း ဟိုလေ..ဒီမလာခင်မှာ မမ အဖိုးကြီးက.. ဟိုကွာ..အင်း ချ.ချ..မော်မော့်အခန်းထဲပဲ ထားမယ်ကွာ..ရတယ်မလား.သူ့အခန်း မှာပဲ ညအိပ်လိုက်မယ် ” သူကစကားကိုမဆုံးခင်ဖြတ်ပစ်လိုက် တော့နားထောင်နေရတဲ့မင်းမင်းမှာဆတ် တစ်ငံ့ငံ့ကြီးပေါ့။ဒါနဲ့ကုတင်ပေါ်ထိုင်ချပြီး ” ဘာရီးလဲ..အန်တီရဲ့..အဖိုးကြီးက ဘာဖြစ်လဲ.လုပ်ပါဦး.ဟီးဟီး ကောင်းခန်း ရောက်မှပဲ..ဟီဟိ ” မကျော့မြိုင်ကကြမ်းပြင်ပေါ်ကိုဒူးနှစ် လုံးထောက်လို့ထိုင်ချလိုက်ပြီးသူ့အိတ်ရဲ့ သော့တွေဖွင့်နေတော့အပေါ်စီးကမိုးပြီး မြင်နေရတာနို့ ကြီးတွေကဖြူဖြူဝင်းဝင်း ပြူးပြူးအိအိကြီးတွေတင်းမို့နေတာပဲ။
တ ရုတ်စပ်တဲ့အသားအရည်ဆိုတော့ဖြူအိ နေတဲ့အပြင်နို့ လုံးကြီးတွေပေါ်က သွေး ကြောစိမ်းစိမ်းလေးတွေကိုပါထင်းထင်း ကြီးမြင်နေရတဲ့အပြင်အသက်ရှူတိုင်းမှာ နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက် တင်းလိုက်လျော့ကျ သွားလိုက်ဖြစ်နေတာမြင်နေရတော့လီးကခုံးခုံးထ,ပြီးတောင်မတ်လာတယ်။သူ့ ပေါင်လုံးကြီးတွေနို့ လုံးကြီးတွေကအားရပါးရကြီး မာတင်းပြူးထွက်နေပုံအတိုင်းဆိုရင်တော့.နှာလည်းတော်တော်သန်ပြီး စောက်ဖုတ်ကြီးကလည်းခုံးဖောင်းဖူးကြွအိစက်နေမှာပဲလို့မှန်းကြည့်နေတော့လိုး ချင်စိတ်နဲ့လီးကြီးကပုဆိုးအောက်မှာတစ် ဆတ်ဆတ်တစ်ဖျောင်းဖျောင်းနဲ့ခုန်တက် နေတဲ့အထိတောင်မတ်လာတယ်။ဟို ရှာ သလို.ဒီရှာသလိုနဲ့ နို့ တွေကိုအကြာကြီး ပြနေထားရင်း မော့ကြည့်ပြီး ” ခိခိ..ဟိုလေကွာ..အဖိုးကြီးက ခ်ခ်.. ဟိုဒင်းကွာ..ဟင်းဟင်း..မကျော့ခရီးခဏ ထွက်မယ်ဆိုမှပဲ..ထုံးစံတဲ့ ခိခိ..ဟိုတုန်းကသူရှေ့တန်းထွက်ခါနီးတိုင်း တစ်ချီလိုး သွားတတ်တဲ့ထုံးစံရှိတာကိုး..ဟီးဟီး.အဲ ဒါနဲ့ထုံးစံဆိုပြီးဖင်ပွတ်နို့ ပွတ်လာလုပ်နေ တော့ မကျော့ကစောက်ရည်တွေထွက် လာတာကွ..ခိခိ..” မင်းမင်းမျက်နှာဆီကအကြည့်လွှဲရင်း မျက်လုံးတွေကလီးဆီကိုရွေ့သွားပြန်လို့ လီးကြီးငေါက်တောက်ငေါက်တောက်နဲ့ မော့မော့ကြီးတောင်နေတာမြင်ရတော့ ပါးစပ်လေးဟ,သွားတယ်။တံတွေးတစ် ချက်မျိုချပြီး ” မမတို့ကတစ်မျိုးလုံးစောက်ရည်ရွှမ်း တယ်ကွ..ဟီးဟီး..သူ့အလိုးမခံရတာကလည်းကာလှပြီဆိုတော့ ခံချင်စိတ်တွေ ထိုးတက်လာတာနဲ့ စောက်ရည်ကပို ရွှဲ ထွက်လာတာ..အဲဒါ ကွာ..လိုးမယ်လုပ် နေကြတုန်းရှေ့တန်းကတိုက်ပွဲကြေးနန်း ဆိုပြီးအရေးတစ်ကြီးလာပို့တော့ ကိုယ့်အဖိုးကြီး တပ်ရင်းရုံးကိုလစ်သွားရရော.. ခ်ခ်.. ကိုယ်လည်းပင်တီလေးချွတ်ပြီးခါမှပဲ အလိုးမခံလိုက်ရတော့..ခ်ခ်..ဒီမှာလေုကြည့်ပါလား. ရွှဲနစ်နေတာပဲ ” ပင်တီဖြူဖြူကြီးလှမ်းပြရင်းပေးတော့ လက်ခုံကိုပါထိအောင်ပွတ်ဆွဲယူပစ်တာ တရုတ်မကြီးထ,လိုက်လာရမလို..ထိုင်ပဲ ဆက်ထိုင်နေရတော့မလိုဖြစ်သွားတယ်။ ” အားပါး..တစ်ထည်လုံးရွှဲနစ်နေတာပဲ..အန်တီက စောက်ရည်ရွှမ်းလိုက်တာ. စောက်ဖုတ်ကြီးထဲဆို စိုစိုအိနေမှာပဲထင် တယ်နော်..ဒါ အကုန်စောက်ရည်တွေပဲ မဟုတ်လား..လီးရည်မပါလောက်ပါဘူး နော်..ဟီးဟီး ” ” ခိခိ..ကိုယ်တို့အမျိုးကအဲလိုရွှမ်းတာ ကွ..ခ်ခ်.အကုန်စောက်ရည်ချည့်ပဲ.အလိုးမှမခံရသေးတာ ဘယ်ကလီးရည်ပါရမှာလဲ..ခ်ခ်..နမ်းကြည့်ကွာ.မယုံရင်နမ်းသာ နမ်းကြည့် ခိခိ ” မင်းမင်းကနှာတစ်အားထန်လာတော့ ပင်တီကြီးကိုမျက်နှာပေါ်အုပ်ထားပြီးရှိုက် နမ်းပစ်တယ်။တရုတ်မကြီးက အကင်းမ သေသေးတဲ့နှာစိတ်တွေ တစ်ဟုန်းဟုန်း တောက်လာပြန်တယ်ထင်ပါရဲ့ ..စောက် ရည်စိုစိုကြီးကိုမင်းမင်းပါးစပ်ထဲထိုးထည့် ပေးလိုက်ရင်း ဖွံ့ဖွံ့ထွားထွားစွင့်စွင့်ကားကားကြီးလွင့် ချင်တိုင်းလွင့်နေတဲ့နှာကြီးကြီး လီးကခပ် ဆာဆာအမျိုးသမီးကြီးဆိုတော့သူ့လင်ရဲ့ လောင်းရိပ်ကလွတ်တဲ့အခြေအနေနဲ့ အချိန်တွေမှာအပြောအဆိုအနေအထိုင်ကို နည်းနည်းမှထိန်းသိမ်းတော့တာမဟုတ် ဘူး။သူ့ရိုးရာသူ့ဓလေ့အတိုင်းနှာကိစ္စပွင့် လင်းလွန်းတော့ အတက်အကျကလည်း အလွန်မြန်တယ်။နှာဆိုတာမျိုးကလည်း အတက်ပဲရှိတာ..တက်မိရင်ပြန်မကျချင် တော့ဘူး… တစ်ချီပြီးတစ်ချီ.တစ်ညပြီး တစ်ည.ဘယ်တော့မှကျတယ်ရယ်လို့မရှိ လေတော့ အသက်သာလေးဆယ်နားနီး လာတာ လူကနှာကြီးလို့ကောင်းတုန်း။ မင်းမင်းပါးစပ်ထဲထိုးထဲ့ပစ်တဲ့သူ့ပင်တီက ရွှဲစိုနေတဲ့စောက်ရည်တွေကို တစ်ပြွတ် ပြွတ်တစ်ပျတ်ပျတ်နဲ့စုပ်နေတာမြင်တော့ မျိုသိပ်ခဲ့ရတဲ့နှာဇောတွေပွင့်ကန်ထွက်ပြီး ငေါထွက်နေတဲ့လီးကြီးကိုလက်နဲ့ဆုပ်ပစ် လိုက်တယ်။မော်မော်ပြောပြထားလို့ လီး ကအကြီးကြီးလို့သာမန်အသိနဲ့သိထားခဲ့ ပေမယ့် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ကြီးထိထိမိ မိ ဆုပ်ကြည့်လိုက်တော့ဗမာလူမျိုးထဲမှာ တော်တော်ရှားတဲ့ လီးအကြီးမျိုးကြီးမှန်း သိသွားတာပေါ့။
သူကလည်းလီးစုပ်တာ ဝါသနာကြီးလေတော့ အားရပါးရကြီးစုပ် ပစ်လိုက်မယ်ရယ်လို့ပုဆိုးစ,ကိုဖြည်ချပြီး ကြည့်တော့မှစောက်ပတ်ထဲကစောက် ရည်တွေတစ်ဖျဉ်းဖျဉ်းစီးထွက်လာရတဲ့အထိအကြိုက်တွေ့သွားတယ်။လီးတန် လီးချောင်းကမာတောက်တောက်ကြီးနဲ့ လီးတန်တစ်လျှောက်မှာသွေးကြောတွေအပြိုင်းအရိုင်း ထောင်းထောင်းထ,လို့ လဒစ်ကြီးပြူးကော့ထောင်တက်နေပုံက ဆေးထိုးလီးမဟုတ်ပဲသဘာဝကြီးတဲ့လီးစစ်စစ်ပါလို့မြင်ရုံနဲ့သိအောင်သက်သေပြ နေသလိုပဲ တရုတ်မကြီးကိုဆွဲဆောင်နေတယ်။လီးချောင်းကြီးကိုလက်နဲ့ဆုပ်ထါး ရင်းနှုတ်ခမ်းမွှာထူထူထွေးထွေးတွေကိုအသာဟ,လို့လဒစ်ကြီးနဲ့တေ့ထားပြီးအ ဖျားကိုလျှာနဲ့တေ့ယက်တော့ရှေ့ပြေးလီးရည်ကြည်လေးတွေချွဲကျိကျိကိုချိုမြိန်မြိန် လေးအရသာခံစားလိုက်ရတာကြောင့် စောက်ဖုတ်ကြောတွေစိမ့်သွားတဲ့အထိ ကျေနပ်ပီတိဖြစ်မိသွားတာပေါ့။ပြီးတော့မှလဒစ်ဖူးကြီးပါးစပ်ထဲငုံသွင်းလို့လျှာဖျား နဲ့ရစ်ရစ်စုပ်ရင်း လီးရည်တွေပန်းပြီးထွက် လာနိုးမျှော်နေမိတယ်။မော်မော်ပြောပုံနဲ့ ဆိုရင်ဒီချာတိတ်ကထိန်းနိုင်လွန်းလို့ ဒီပုံမျိုးလောက်လေးနဲ့တော့လီးရည်သောက် ရဖို့လမ်းမရှိသေးဘူး..အလိုးခံရင်းနဲ့တစ် ချီတစ်မောင်းပြီးခါနီးမှဒီလီးကြီးအားရပါး ရစုပ်ပစ်ပြီးလီးရည်တွေတစ်ဝ,သာက်ပစ် မယ်လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးသူ့ပါးစပ်ထဲကလီးကြီးကိုပလွတ်ဆိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ ” အားဟား..သိပ်ကြိုက်တယ်မင်းမင်း. ဒီလီးကြီးတော့မမကျော့အရမ်းကြိုက်နေ ပြီ..အထင်သေးချင်လဲသေးတော့..မမကို လိုးပေးတော့နော်.စောက်ပတ်ထဲတအား ကြီးရွနေပြီ..မမကနှာကြီးတယ်.ဟင့်ဟင့် လိုးတော့နော် ” မင်းမင်းကသူ့ပါးစပ်ထဲကပင်တီကြီး ကိုဆွဲထုတ်ပြီးစောက်ရည်အနှစ်ပျစ်ပျစ်ချွဲချွဲတွေကိုလျှာနဲ့ယက်နေရင်းကျော့ပါးစပ် ကိုငုံစုပ်လို့ထည့်ပေးနေတော့ အလုအယက်နဲ့ တစ်ဂွတ်ဂွတ်မျိုချပစ်ရင်းအင်္ကျီ ချွတ်ပစ်တယ်။ဘရာစီယာချွတ်ပြီးပြီးချင်း မင်းမင်းလက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲယူပြီးနို့ လုံး အိအိကြီးပေါ်တင်ပေးတော့ မင်းမင်းက တစ်ချက်နှစ်ချက်ဆုပ်ဆုပ်နယ်ပြီးနို့ သီး ခေါင်းကြီးတွေဆွဲဆွဲထုတ်ချေတာနဲ့နှာက ပိုပိုကြွလာပြီးစောက်စေ့ပါယွစိစိဖြစ်လာ တယ်။ဒါနဲ့ ထမီကွင်းလုံးကျွတ်ပုံချပစ်ပြီး မတ်တပ်ရပ်လျက်နဲ့ နို့ ဆွဲနေတဲ့မင်းမင်းလက်ကိုဇွတ်အတင်းဖြုတ်ယူပြီးစောက် ဖုတ်ကြီးပေါ်တင်ပေးပစ်တယ်။ ” အင့်ကွာ..အင့်..စောက်စေ့ကြီးပွတ် ချေပေး..တအားစိတ်ထ,တယ်ကွာ..လီး ဆာတယ်..လီးဆာတယ်..တအားအလိုးခံချင်တယ်..အီးဟီး ” ဖင်ကြီးကော့ကော့ပြီးစောက်ဖုတ်ကြီး ရှေ့တိုး တိုးပေးနေတော့မင်းမင်းကအား ရပါးရဖိချေပစ်ပြီး စောက်ခေါင်းဝ,ထိယီု ကျနေတဲ့စောက်ရည်တွေကိုတစ်ချက်စုပ် ယူပစ်ရင်းမျက်နှာချင်းဆိုင်မတ်တပ်ရပ် လိုက်တာပေါ့။
” အန်တီ့ စိတ်ကြိုက်ပုံစံနဲ့လိုးပေးမယ် နော်..ဘယ်လိုကြိုက်လဲ. ” ” ဟား..အကုန်ကြိုက်တာကွ..ဘယ် လိုလိုးလိုး ကြိုက်မှာပဲ.မော်မော်ပြောတာ တော့ မောင်လေးကဒီလိုကုတင်စောင်း မှာဖင်တေ့ခံရင် အသေလိုးတယ်ဆို..သူ တောင်မှစောက်ပတ်ပြဲသွားဖူးတယ်လို့ ပြောတာပဲ.. မမအဲလိုခံကြည့်ချင်တယ်.. ပြီးတော့မှပဲ မမအပေါ်ကတက်လိုးတော့ မယ်ကွာ..တစ်ယောက်တစ်လှည့်လိုးပေး ကြေးပဲ..ဖြစ်တယ်မလား ” ပြောပြောဆိုဆို ကုတင်စောင်းမှာဖင် တေ့ပြီးပက်လက်လှန်အိပ်ချရင်း သူ့ခြေ ကျင်းဝတ်တွေလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ဆွဲယူ သွားတယ်။မင်းမင်းက ခေါင်းအုံးတစ်လုံး ဆွဲယူပြီးဖင်အောက်ကိုထိုးခုပေးတော့သူ့ ဖင်ကြီးချွပေးရင်းရွပြီးခုန်နေတယ်။သူတို့ သဘာဝအတိုင်းစောက်မွှေးတွေကထူထူ ပြိန်းပြိန်း မဲမဲနက်နက်နဲ့အရောင်လက်နေ အောင်ပေါက်နေကြတာအားရစရာကြီး။ အသက်လေးဆယ်နီးပြီဆိုပေမယ့် တစ် ပတ်ဆယ်ရက်လောက်နေမှတစ်ခါအလိုး ခံရတဲ့စောက်ပတ်ဆိုတော့အလတ်ကြီးရှိ သေးတာကြွက်နားရွက်တွေတောင်မှပန်း ရောင်ပြေးပြီးတင်းနေတုန်းပဲရှိနေသေးတယ်။စောက်စေ့ကလည်းပြူးထွက်နေ အောင်ကြီးနေပေမယ့် တင်းတင်းဖူးဖူးနဲ့ သွေးရောင်လျမ်းဆဲ ရွှမ်းတောက်ဆဲပဲ။အမဲစက်ဆိုလို့ စောက်မွှေးတွေဖုံးနေတဲ့ နခမ်းသားအထက်စွန်းကမှဲ့နက်ကြီးတစ် လုံးပဲ ရှိတယ်။ အိမ်ထောင်ရှင်မိန်းမပီပီ ခွင်ကျကျအသင့်ကားပေးထားပြီးပြီဆိုတော့မင်းမင်း ကကြမ်းပြင်ပေါ်ရပ်ပြီးသူ့ကိုယ်ပေါ်ကိုင်း မှောက်လို့နှုတ်ခမ်းတွေစုပ်နမ်းလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သူ့လျှာကမင်းမင်းပါးစပ်ထဲလူး လွန့်တိုးဝင်လာတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် လက် ကလီးကိုကိုင်ပြီးစောက်ခေါင်းဝ,မှာတေ့ ထားပေးပြီးပြီ။သူ့ရဲ့ယစ်မူးဖွယ်အနမ်းအ စုပ်ကိုအရသာခံရင်း လီးကိုတစ်အိအိ ဖိ ထိုးထည့်လိုက်တော့ နမ်းနေရင်းနဲ့ကျော့ ကျော့မြိုင်ဆီကလည်ချောင်းသံတွေတစ် အီးအီးမြည်လာတယ်။ ” အားဟာ့..တအားတုတ်တယ်ကွ.. အီးဟီး..ကိုယ်က လီးကြီးကြီးနဲ့တွေ့ဖူးခဲ့ တာမဟုတ်ဘူး..အာ့.အာ့..ဖြည်းဖြည်း.. ပြည့်သိပ်နေတာပဲ..ဖြည်းဖြည်းချင်းနော်. အင်း..အင်း..ကောင်းထာကွ..ညှစ်ပြီနော် အားပါး..ကောင်းလိုက်တာ..လီးကြီးကတင်းနေတာပဲ..အရသာရှိလိုက်တာ..လိုး လိုး.ထည့်..အင်း..အာ့..အရင်းထိပလား. ဟင့်..ဟင့်..အရင်းလဲမထိသေးဘူး ” လက်တစ်ဖက်နဲ့စောက်ဖုတ်ပေါ်ကလျှိုထိုးထဲ့ရင်းလီးကြီးကိုစမ်းကြည့်လိုက် သေးတယ်။လီးကအရင်းထိမဆုံးသေးပဲ စောက်ဖုတ်အပြင်မှာတစ်လက်မကျော် ကျန်နေသေးတာတွေ့တော့လက်ကခြေကျင်းဝတ်ကိုပြန်ဆွဲပြီးဖင်ဆုံကြီးပင့် ပေးပစ်ပြန်တယ်။ ” ဟင့်..လိုးပါမောင်ရဲ့..မောင့်လီးကြီးက အရသာရှိလွန်းလို့ပါ..ဖိလိုးထဲ့လိုက်.. အားမနာနဲ့ လိုး လိုး လိုးသာလိုး.. ဖီလင် တက်နေပြီ လိုး ” အရပ်ကမြင့်မြင့် ဖင်ဆုံကကြီးကြီး.. စောက်ဖုတ်အုံကြီးက ဖောင်းကားပြီးဖူးမို့ ခုံးမောက်နေတာဆိုတော့ သူ့ဟာနဲ့သူအ ဟုတ်ကြီးပဲထင်နေတာ။သူ့ကိုလိုးခဲ့ဖူးကြ တဲ့သူတွေဆိုတာကလည်း တစ်ချက်ထဲနဲ့ လီးအရင်းထိဝင်အောင်သွင်းပြီးပုံမှန်တစ် ခါ သွက်သွက်တစ်လှည့်လိုးပေးခဲ့ကြတာ ချည့်ပဲတွေ့ခဲ့ဖူးတာဆိုတော့အခုလည်းအဲ လိုပဲမျှော်လင့်နေတာပေါ့။
အရင်းထိမဝင် သေးမှန်းသိလိုက်လို့အားမလိုအားမရနဲ့ဖိ သွင်းခိုင်းနေပေမယ့် တစ်ကယ်တော့လီး ဒစ်ဖျားကသူ့သားအိမ်ခေါင်းဝ,ကိုတေ့ပြီး ထောက်မိနေပြီဆိုတာ ခပ်အောင့်အောင့် မို့သိတော့သိနေပြီ။ မင်းမင်းကလည်းပူနွေးချွဲကျိတင်းကျပ် လွန်းလှတဲ့ တရုတ်မကြီးရဲ့စောက်ခေါင်းကပေးတဲ့လီးအရသာကို တစ်စစ်စစ်နဲ့ ခံ စားလို့အားမရနိုင် မဝ,နိုင်သေးဘူး။ဒါပေ မယ့် အတင်းဖိလိုးခိုင်းနေတော့စိတ်ထဲမခံချိမခံသာဖြစ်လာသလိုကြီးမို့ဝင်နေသ လောက်နဲ့လေးငါးဆယ်ချက်ဆွဆွလိုးပြီး လီးအရင်းထိတစ်ချက်တည်းဖိဆောင့်ပစ် လိုးပြီးဆီးခုံချင်းဖိကပ်ထားလိုက်တယ်။ လက်တွေကပုခုံးနှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ဆွဲအား ပြုဖိကပ်ထားတာဆိုတော့တရုတ်မကြီး ဘယ်လိုမှရုန်းမထွက်နိုင်ပဲဖင်ကြီးကားဖြဲ ထားပြီးတစ်အားအားတစ်အီးအီးအော် ခံ နေရတာပေါ့။သူကအော်လေမင်းမင်းက ဆီးခုံချင်းကပ်ဖိပြီးကြိတ်သွင်းချေညှောင့် လေလေ..လီးတန်ကြီးကအကြောစန့်ပြီး ဝင်ဖိလေလေ..အခုမှပဲလီးအရင်းထိထိုးသွင်းခံရတဲ့အရသာကိုပထမဆုံးအကြိမ် ကောင်းကောင်းကြီးသိသွားတယ်။ဒါပေ မယ့် တရုတ်မကြီးကလိုးအထာနပ်တယ် ပြောရမှာပဲ.ထင်သလောက်တော့ပြာယာ ခတ်မသွားဘူး။ခြေကျင်းဝတ်တစ်ဖက် ဆွဲထားတဲ့လက်ကိုလွှတ်ပြီးသူ့စောက်စေ့ ကိုအတင်းလှိမ့်ချေပစ်နေရင်းအညှောင့်ခံ တာဆိုတော့အော်ရင်းအော်ရင်းနဲ့စောက် ရည်တွေစိမ့်စိမ့်ထွက်လာပြီးတစ်ချက်မှမ ဆောင့်လိုက်ရသေးခင် မိမိရရကြီးတစ်ချီ ပြီးသွားရတယ်။ ” အူးဟူး..ကောင်းလိုက်တာမောင်ရာ မကျော့တစ်ခါမှဒီလိုမပြီးဖူးဘူး..အရသာ ရှိလိုက်တဲ့လီးကြီး..ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်.လိုး ကွာ..စောက်ရည်တွေရွှဲကုန်ပြီကွ..သုပ် ပေးရမလား ” ပေါင်ရင်းခွဆုံ ပေါင်ခြံတွေရောဂွေးဥတွဲတွဲကြီးမှာရော သူ့ပေါင်ကြားတွေမှာ ရောစောက်ရည်တွေကရွှဲအိနေတော့ ဖိဖိညှောင့်လိုးလိုက်တိုင်းစွိစွက် စွိစွက်နဲဘအသံတွေကဆူညံနေတာရွှံ့ ဗွက်တောထဲလမ်းလျှောက်နေရတဲ့အတိုင်းပဲ။လီးနဲ့ စောက်ခေါင်းကကျပ်သိပ်နေတော့လိုးရ တာအရသာအပြည့်ရှိနေတဲ့အပြင် ဒီအသံတွေနားထောင်ရင်းလိုးရတာပိုပြီးစိတ် ကြွစေသလားလို့ခံစားရတော့. ” မသုပ်နဲ့ကွာ.အဲအသံတွေကြားရတာ ဖီးလ် ပိုတက်တယ်..နားထောင်ရတာလီး ပိုတောင်တယ်..လိုးပြီကွာ ” ” အွန့်.အာ့..လိုးကွာ..လိုး..ဆောင့်.လိုး အသေဆောင့်..အိုးဟိုး..တစ်ကယ်လိုးတာ..သေပြီ သေပြီ..အဲလောက်ကြီးလိုး ရလားဟယ်..ကြမ်းလိုက်တာ ” လီးကိုတစ်ဝက်ကျော်ကျော်စောက် ခေါင်းထဲမြုပ်ပြီးအဝင်အထွက်ပုံမှန်နဲ့လိုး ပေးနေတော့အရသာကတစ်ရှိန်းရှိန်းထိုး တက်လာနေပြီ။အရသာကောင်းလွန်းလို့ လိုးပါ ဆောင့်ပါနဲ့ တစ်တွတ်တွတ် တစ်ဖွ ဖွ ညည်းနေတော့အဟုတ်မှတ်ပြီးလီးအ ရင်းထိပစ်ဆောင့်လိုးထည့်လိုက်မိတော့ သတိလက်လွတ်နဲ့သံရှည်ဆွဲပြီးအော်ပစ် ရော။ခုလို စိတ်လွတ်လက်လွတ်အော်ပြီး အလိုးခံရတယ်ဆိုတာကျော့ကျော့မြိုင်ရဲ့ ဘဝမှာတစ်ခါမှမရှိဖူးဘူး။လင်ငယ်နဲ့ခံရ တယ်ဆိုတာကလည်းတပည့်တွေအခိုင်း အစေတွေ သိမှာစိုးရလို့ကြိတ်လိုးခဲ့ရတာ ချည့်ပဲဆိုတော့အာသီသပြေရုံလောက်ပဲ ခံရဲတယ်။မအော်ရဲဘူး။ပြီးတော့ ကျော့ကအပေးကောင်းလွန်းလို့ထင်တာပဲ.သူ့ လင်ကြီးကအစ, နာရီဝက်ထိန်းလိုးနိုင်တဲ့ သူဆိုတာမရှိခဲ့ဖူးဘူး။
သူ့လင်ကြီးဆိုရင် နောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုလိုးဖို့ဆိုတာကြောက် တောင်ကြောက်လာပြီလို့ဖွင့်ပြောယူရတဲ့ အထိအပေးကောင်း အပေးကြမ်းတယ်။ အခု.မင်းမင်းနဲ့အလိုးခံရတော့မှဝဋ်လည် တော့တာပဲ..အင်မတန်အလိုးကြမ်းလွန်း လို့ ထိန်းနိုင်လွန်းလို့လန့်တောင်လန့်လာ သလိုပဲ..သူတစ်ချီပြီးဖို့အရေး ဒီလောက် အပေးကောင်းတာပြီးကိုမပြီးနိုင်ဘူး။ နို့ ကြီးတအားဆွဲစို့ပြီးလိုးနေရာကသူ့ကိုယ်ကိုမတ်လိုက်ပြီး ခြေထောက်တွေ ဆွဲယူလို့ပုခုံးတွေပေါ်ထမ်းတင်နေတော့ အချိန်ရတုန်းစောက်စေ့ကိုလှိမ့်လှိမ့်ပွတ် ချေပစ်တာပြီးလုပြီးခင်မှာ နို့ကြီးတွေဆုပ် ဆွဲပြ ဖျောင်းကနဲပစ်ဆောင့်လိုးပေးလာ ပြန်တော့ကော့ထိုးကော့လန်နဲ့ကျော့မြိုင် တစ်ချီပြီးသွားပြန်ရော. ” ပြီးအောင်လိုးပေးစမ်းပါမောင်ရာ.. ကျော့သေလိမ့်မယ်..မောင့်လီးကြီးအား ရပါးရစုပ်ပြီး လီးရည်တွေသောက်ချင်လို့ ပါ..နော် မောင်..အပြီးလိုးပေး..” မတ်တပ်ရပ်လျက် နို့ကြီးတွေစုံဆုပ်ဆွဲ ပြီးအသေလိုးတော့ တစ်ဖုံးဖုံးတစ်ဖောင်း ဖောင်းနဲ့ သူ့ကိုယ်ကြီးကလွင့်ပြေးတယ်။ ခေါင်းအုံးတစ်ခြား ဖင်တစ်ခြားဖြစ်နေပြန် တော့စောက်ဖုတ်ကနည်းနည်းနိမ့်ကျနေ ပြီး လိုးရတာလီးအရင်းထိမဝင်ပြန်ဘူး။လီးအဖျားကောက်ကောက်ကြီးနဲ့ပဲကော် ကော်ပြီးလိုးနေတော့ အရသာကြောစုတဲ့ စောက်စေ့အခြေကိုဆွဆွပေးနေသလိုပဲ ဖြစ်နေပြန်တာမို့ကျော့မြိုင်လူးနေအောင် အရသာတွေ့နေပြန်တယ်။အချက်လေးငါးဆယ် အဲလိုကြီယ် အဲလိုကြီးဆွလိုးနေတော့ ” လိုးပါမောင်ရဲ့..ကောင်းလှပြီ.တအား ကောင်းနေပြီ..ပစ်လိုးစမ်းပါ..အင့် အင့်.. လိုး..အသေပစ်လိုး ” လက်ဖျံနှစ်ဖက်ဆွဲယူအားပြုပြီးဖင်ကြီး အတင်းကော့ကော့ထိုးပေးနေတော့ မင်း မင်းကဇောတွေကြွလာပြန်တာပေါ့။ဒါနဲ့ လီးအရင်းထိဝင်အောင်ပစ်ပစ်ဆောင့်ချင် လာတော့ကုတင်ပေါ်ခြေစုံတက်ပြီးကျော့ မြိုင်ဖင်ဆုံကြီးကိုကားယားခွလို့ကုန်းကွကွနဲ့ဆောင့်လိုးတယ်။ဒါလည်းလိုးရတာ သိပ်အထိုင်မကျဘူး..လီးနဲ့စောက်ခေါင်း ခွင်မကျတော့ထစ်ငေါ့ထစ်ငေါ့ဖြစ်နေတာ နဲ့ဖင်ဆုံကြီးခွလျက်ဆောင့်ကြောင်ထိုင်ချ ပစ်ပြီး ခြေဖျားထောက်လိုးပြန်တာပေါ့။ ခြေထောက်တွေကိုပုခုံးပေါ်မှာထမ်းထားတာဆိုတော့ ဖင်ကြီးမော့နေပြီးစောက် ဖုတ်ကြီးပွင့်နေတာ တစ်ဖြောင်းဖြောင်း တစ်ဖုံးဖုံးနဲ့တရုတ်မကြီးမျက်လုံးပြူးမျက် ဆန်ပြူးအော်ရပြန်တာပဲ. ” သေပြီ..အားဟား..သေပါပြီ..အိုး.. အိုးဟိုး..လီးရည်တွေပါးစပ်ထဲထည့်နော် အပြီးလိုး..သေပေ့စေ အပြီးဆောင့် အာ့ အား..ဆောင့်..သေပေ့စေ ဆောင့်.ပြီးပြီ. မကျော့ပြီးပြီ..ပြီးပြီနော်..အားဟား.အင့် မောင်ပြီးအောင်လိုး..အာ့..ထည့် ပါးစပ် ထဲလာထဲ့..အင်း အင်း ဂလု ပလွတ် ပု ” မကျော့မြိုင်ဘော်ဒီက အဟန့်ကြီးပြီး ထယ်လွန်းလို့ တော်ရုံလူ တော်ရုံလီးနဲ့ဆိုနိုင်အောင်လိုးဖို့စိတ်ကူးတောင်ယဉ်ရဲကြတာမဟုတ်ဘူး။ဖင်ဆုံကြီးမြင်လိုက်ရရုံနဲ့ လီးကိုတစ်ထောင်ထောင်ထ,လာစေနိုင် ပြီး စိတ်ကူးနဲ့လိုးကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ့်လီးကသူ့စောက်ဖုတ် နခမ်းသားထူထူ ကြီးတွေထဲကိုမြုပ်နစ်ဝင်သွားလို့ပျောက် သွားပြီလားတွေးလိုက်ရမယ့် ဘော်ဒီမျိုး ပေါ့။ယောင်္ကျားတွေအတွက်လိုးလည်းအရမ်းလိုးချင်စရာကောင်းပြီးလိုးခွင့်ရရင် လည်းနိုင်အောင်.. ဝ,အောင်လိုးပေးနိုင် မှာမဟုတ်မှန်း ကြိုသိနေကြရတဲ့ဘော်ဒီမျိုးဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။မကျော့မြိုင် ကိုယ်တိုင်ကလဲ..အလိုးခံခဲ့ဖူးသမျှလိုးတဲ့ လူသာ ပက်လက် မှောက်ခုံမေ့သွားမယ် သူကဘယ်တုန်းကဘယ်သူ့ကို ငြင်းဆန် ခဲ့ရတယ်လို့မရှိခဲ့ဖူးတော့အရှုံးမရှိဖူးခဲ့တဲ့အလိုးဘုရင်မကြီးမှန်းသူ့ကိုယ်သူသိနေ.. ခံယူနေတာပါ။
မော်မော်ကညွှန်းလွန်းလို့မင်းမင်းနဲ့အ လိုးခံကြည့်တော့မှ လီးအနေအထားရော လိုးချက်ဆောင့်ချက်တွေကိုပာပထမအချီ အလိုးခံလိုက်ရရုံနဲ့အားရကျေနပ်စိတ်ဖြစ် ရလွန်းလို့ပါးစပ်တစ်ခုလုံး လီးရည်တွေနဲ့ ပြည့်လျှံထွက်သွားတဲ့အထိစုပ်ယူမျိုချပစ် လိုက်မိတော့တယ်။တစ်ကယ်တော့ ဖင် ကြီးတာက ကြီးတဲ့တစ်ပိုင်း.စောက်ခေါင်းကျဉ်းတာကကျဉ်းတာတစ်ပိုင်းပဲလေ.ဖင် ကြီးလို့ညှပ်ရိုးကျယ်သွားတာမှမဟုတ်ပဲ။ ညှပ်ရိုးတွေတင်ပါးဆုံရိုးတွေနဲ့ကြွက်သား မျှင်တွေက ဖင်သားကြီးလာတိုင်း လျော့လျဲပျော့တွဲသွားတာမှမဟုတ်ပဲ..ကျဉ်းမြဲကျဉ်းနေဆဲမို့ ဖင်ဆုံကြီးရဲ့ မြှင့်အား.ကန် အား ခံအားတွေကြောင့် လိုးလို့ပိုတောင် အရသာရှိနေပါသေးတယ်။မင်းမင်းကအဲ ဒီအရသာတွေကိုတစ်စိမ့်စိမ့်ခံစားယူပြီး လိုးသွားတာဆိုတော့ အနှစ်တွေစားသွား တာလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။ ” ဟွန်း..မော် ပြောလဲပြောလောက်ပါ တယ်..တကယ်ပဲ..မကျော့ အလိုးခံလာတာနှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်လောက်ရှိပြီ..သူ့ လိုလူ မကြုံဖူးဘူး အဟုတ်ပြောတာ ” မကျော့ကလီးရည်တွေအားရအောင် စုပ်ယူမျိုချပြီးပြီဆိုမှသူကမကျော့ကိုယ် ပေါ်မှောက်ချလိုက်ပြီးပေါင်ကြားခွင်ထဲမှာလီးကြီးထိုးမြှုပ်လိုက်တော့ မကျော့က သူ့နှုတ်ခမ်းကိုလာနမ်းရင်း မျက်စေ့လေး မှေးကြည့်ပြီးပြောတာ။ ” အင်..ဒေါ်လေးကဘာတွေပြောထား လို့လဲ..” ” အစုံပဲ.အစုံပဲ..ခိခိ နှာကြီးတာရော. လီးကြီးတာရော အလိုးသန်တာရော.ဖင် လိုးတာရော..စောက်ပတ်ယက်တာရောစုံလို့..ခိခိ ” ” မမ ဖင်ခံချင်လို့လား ” ” ခိခိ..ဖင်တော့မခံဖူးသေးဘူးကွ.. ကျော့ကိုဖင်တောင်းလိုးတဲ့သူလည်းမကြုံ ခဲ့ဖူးပါဘူး..ဟင့် .မောင်အနှူးကောင်းရင် တော့ ဒီတစ်ခါဖင်ပာအလိုးခံမိမလားမသိဘူး.ခ်ခ် ” ” မောင်က ဖင်မလိုးရလဲ..ဖင်တော့ ယက်မှာပဲ..ခိခိ..မမဖင်ကြီးကအားရပါးရ ယက်ပစ်ချင်စရာကြီး..အကြီးကြီးပဲ ” ” ခိခိ..အပြောကောင်း..ဖင်ခံချင်စိတ် ပေါက်လာအောင်ပြောတာ..ခိခိ..ဒီမှာ.. ကြည့်..ဟောဒီစောက်ဖုတ်ကြီးအလိုးခံလို့ဝ,သွားရင် ဖင်ခံပေးမယ်. ဟုတ်ပီ လား..” လီးကြီးကိုင်ပြီး သူ့စောက်ပတ်ကိုရိုက် ရိုက်ပြောနေတော့ လီးကဘယ်အငြိမ်နေ ပါ့မလဲ။ ” ဟိတ်..အခုမှလိုးပြီးခါစ,လေကွာ.. ကျွတ်ကျွတ်..မထိရဲအောင်တောင်ဖြစ်နေ ပြီ..ခိခိ..တအားမာတာပဲနော်..သန်ထာ လီးကြီးက ” ” အကြာကြီး လိုးမယ်နော် ” ” လိုး..ဗွက်ပေါက်အောင်လိုး..ခ်ခ်..ဒီ ကစောက်ရည်သိပ်ရွှမ်းတာနော..ချောင်း ပေါက်သွားအောင်ခံပစ်မှာ..ဟင်း လိုးနိုင် မှပြော ” ပက်လက်လန်နေလျက်က ပေါင်ကြီး တွေဆွဲတင် ခွင်ကျကျပြင်ပေးနေရင်းနဲ့ လည်တိုင်ကိုသိုင်းဖက်ပြီးနှုန်ခမ်းတွေကို တအားစုပ်နမ်းတယ်။သူ့လျှာလေးကိုပါး စပိထဲလျှောကနဲထိုးထည့်ပြီးလူးလွန့်စုပ် ယူနေတော့ လီးကသူ့စောက်ဖုတ်အကွဲ ကြောင်းကိုထယ်ထိုးနေပြီ။ခပ်ကြာကြာ နမ်းစုပ်ပြီးပြီဆိုမှ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ခေါင်းကို အုပ်ကိုင်ပြီးသူ့နို့ လုံးဖြူဖြူအိအိကြီးပေါ် မျက်နှာအပ်ပေးတယ်။ဖင်ချွပြီးသူ့စောက် ခေါင်းဝ,ကို လဒစ်ဖျားတေ့တော့အသက် အောင့်ထားတာလားမသိဘူး..သူ့ဆီက အသက်ရှူ သံမကြားရတော့ဘူး။
လီးဒစ် နဲ့လေးငါးချက်ဆွဆွသွင်းပြီး တစိအိအိ ထိုးသွင်းပေးလိုက်တော့ ပါးစပ်ဟ,ပြီး လေတွေမှုတ်ထုတ်တာ ဟားကနဲအသံ နဲ့အတူကြာညိုနံ့သင်းတဲ့အာခံတွင်းနံ့က ပျံ့လွင့်လာတယ်။လီးက တစ်ဝက်ကျော် ကျော်တော့စောက်ခေါင်းထဲမြုပ်ဝင်နေပါ ပြီ။နို့တန်ကြောကိုရှေ့သွားတွေနဲ့ကြိတ် ကြိတ်ချေဆွဲရင်း နို့သီးခေါင်းလေးတွေ လှိမ်လှိမ့်ဆော့ပေးနေတော့ သူ့စောက် ခေါင်းကလီးချောင်းကိုညှစ်ညှစ်စုပ်တာ နဲ့ပဲ တကယ့်ကိုစောက်ရည်တွေကတစ်စွိစွိထွက်လာနေတာဂွေးဥကြီးတွေထိစိုနစ် သွားပြီ။ ” မောင်..မကျော့ လီးတစ်ချက်တော့ စုပ်ချင်သေးတယ်ကွာ..အရည်တွေရွှဲနစ် နေတဲ့လီးမှစုပ်ချင်တာ..ချွတ်ပေး ” ” ဟင်းဟင်း..မောင်လဲ မကျော့ကို စောက်ပတ်ယက်ပေးမှာပေါ့..အဲစောက် ရည်တွေတအားစုပ်ပစ်ချင်တာပဲ ” ” ခြောက်ဆယ့်ကိုး လား..အင်း အင်း ကြိုက်တယ်..ကြိုက်တယ်..ဒါပေမယ့်.. ခဏပဲနော် မောင်..မကျော့ကမောင့်လီး ကြီးစောက်ခေါင်းထဲမြုပ်နေတဲ့အရသာ ကိုသိပ်ကြိုက်နေပြီ..ပြည့်နေတာပဲ ” ဒါနဲ့ လီးကိုစောက်ခေါင်းထဲကဆွဲချွတ် ပြီးသူ့ကိုယ်ပေါ်ကို ခပ်မြန်မြန်လေးခွပြီး လှည့်ပေးလိုက်တော့လီးကြီးကိုအတင်း ဆွဲစုပ်တယ်။မင်းမင်းကလည်းသူ့စောက် ခေါင်းဝ,မှာအိုင်ထွက်နေတဲ့စောက်ရည် စုတွဲတွဲလေးတွေကို လျှာပြားကြီးနဲ့စုပ်ယူမျိုချပစ်ပြီး ဖင်ပေါက်အထိယက်ပေးပစ် တယ်။ဖင်ပေါက်ကိုလျှာနဲ့ထိုးထိုးဆွပေး နေရာက စောက်ခေါင်းထဲလျှာထိုးထဲ့စုပ် တော့မကျော့ကလီးကြီးကိုပါးစပ်ထဲကဆွဲထုတ်ပြီးအော်ပြီ.. ” အာ့..ဟာ့ ဟာ့..ရပြီမောင်..ရပြီ.. လျှာနဲ့မထိုးနဲ့. လီးနဲ့ထိုး.လီးနဲ့ထိုး..အား ဟား..လိုးတော့ လိုးတော့..လိုးပေးတော့ အီးဟီး.ဖင်ကိုလိုးတော့မလိုလိုနဲ့ လာဆွလိုက်သေးတယ် ဟင်း..မကျော့သိတယ် နော်..သူ့လီးကြီးနဲ့မခံရဲသေးပါဘူး..ဒါပဲ.. စောက်ဖုတ်ပဲလိုး ..စောက်ဖုတ်ကြီးပဲ ” မင်းမင်းကသူ့ပေါင်ကြီးတွေတွန်းတင် ရင်းဒူးချထိုင်လိုက်တော့သူကတအားခံ ချင်နေပြီလေ.. လက်တစ်ဖက်နဲ့လီးကို လာဆွဲပြီးစောက်ခေါင်းဝ,မှာကိုင်တေ့ ပေးထားတယ်။ ” အင့်..ထည့်..အရင်းထိမြုပ်အောင် ထည့်ပြီး ဖိဖိဆောင့်လိုးပေး..သားအိမ် ထိအောင်ဖိဖိဆောင့်လိုး ကွာ..အဲဒီလို အရသာ တအားကြိုက်ပဲ..လိုး ” ” လီးရည်တွေ စောက်ပတ်ထဲပဲပန်း ထည့်မှာနော်..ကြိုက်လား ” ” အင်းပါ..အင်းပါ..အားရသလိုသာ လိုး..ဆေးတော့မစားခဲ့သေးဘူး. ဗိုက် ကြီးချင်ကြီးပေ့စေတော့..လိုး .ရတယ် လိုး..လိုး အားဟာ့ ဆောင့်တော့ကွာ ” တရုတ်စပ်စော်ကြီးကအပေးကြမ်း အ ပေးကျွ မ်းသလောက် လိုးတဲ့သူကလည်း အသက်လေးကဆယ့်ရှစ်နှစ်မပြည့်တစ် ပြည့်နဲ့အားကောင်းမောင်းသန် လိုးမာန် ထ,နေတဲ့အရွယ်ဆိုတော့ အသေအလဲ လိုးတာပေါ့။
ဒီလို ပစ္စည်းမှန် ပစ္စည်းသန့် အသေထန်တဲ့စော်ကြီးမျိုးကလည်းတွေ့ နိုင်ခဲပါဘိခြင်း ဆိုတော့စောက်ခေါင်းထဲ ကလီးခဏချွတ်ရမှာကိုတောင်မှအင်တင် တင်နဲ့မချင့်မရဲဖြစ်ရတယ်။မကျော့မြိုင် ကတော့ တစ်ခိခိတစ်ဟင့်ဟင့်နဲ့ သူလိုးတိုင်းခံပေးနေတာပါ..။ အမေတို့ပြန်လာတဲ့မနက်မှသူ့ပစ္စည်း တွေကပျာကယာသိမ်းပြီးပြန်တော့မယ် ဆိုလို့အံ့သြမိတယ်။ ” ခိခိ..ကိုယ် ဒီကိုလာမယ်ဆိုတာမော် မသိဘူး မောင်ရ..မော်နဲ့ချိန်းထားတယ် ဆိုတာ တွေ့တွေ့ချင်းစကားလှအောင်လို့ မောင့်ကိုညာပြောတာ ခိခိ..မောင့် လီးအ ကြောင်းညွှန်းလွန်းလို့သူပွဲသွားမယ့်နေ့မှ တမင်သက်သက်လာခဲ့တာ ..ကိုယ်တို့ လိုးကြတဲ့အကြောင်းတွေ.မော့်ကိုဘာမှမ ပြောပြနဲ့နော် ” သူပြန်သွားပြီးတဲ့နောက် အိပ်ယာထဲမှာလှဲနေတော့ဘာမှမကြာလိုက်ပါဘူးလို့ ထင်တာပဲ..အမေတို့ပွဲကပြန်ရောက်လာတယ်။မှေးကနဲအိပ်ပျော်တစ်ဝက်နိုးတစ် ဝက်နဲ့.လီးကရွစိရွစိ မွနေတော့လန့်ပြီးနိုး လာတာ.. ” အွန်း….ဟွန့်.. မေချစ်..” ” အွင်..ခိခိ..ဗိုက်ထဲက ချာတိတ်လေးက နို့ဆာလို့ တဲ့…ခိခိ..နို့တိုက်ပေးလိုက် ဦး..ဒီလီးကြီးထဲက သူ့အဖေနို့ရည် ပျစ်ချွဲ ချွဲ တွေ ခ်ခ်..” မြထွေးကသူစောက်ပတ်ရွနေတာကိုရွနေတယ်လို့မပြောပဲဗိုက်ထဲက ကလေး ကိုယိုးမယ်ဖွဲ့တယ်။လီးစုပ်နေတဲ့မျက်နှာ ကိုလက်နဲ့အုပ်ကိုင်ပြီးဆွဲတင်တော့ သိပ် မလိုက်ချင်သေးဘူး..လီးကြီးကိုရှေ့သွား လေးတွေနဲ့မချင့်မရဲ တစ်ချက်ကိုက်ပြီးမှ နှုတ်ခမ်းမွှာတွေကလီးတန်ကိုပွတ်ဆွဲရင်ွးှုမျက်နှာကအပေါ်လိုက်လာတယ်။သား အမိနှစ်ယောက် ပက်လက်မှောက်ခုံထပ် လျက်မျက်နှာချင်းဆိုင်မိကြတော့သူ့လျှာ လေးကိုပါးစပ်ထဲအတင်းထိုးထဲ့ပြီး တစ် မြေ့မြေ့စုပ်နမ်းနေတာအကြာကြီးပဲ။နမ်း နေရင်းနဲ့အကိင်္ျီ တွေအကုန် ချွတ်ပစ်ပြီး ” နို့တွေနယ်ပေးပါကွာ.အားရပါးရကြီးသာနယ်ပေး..ဖီးလ်တက်လာတာ. ခိခိ.. ပွဲခင်းထဲမှာရော လှေပေါ်မှာပါ ကောင်မ တွေနို့ နယ်ခံနေကြတာမြင်ရတော့ ကိုယ့်လင်ကိုသိပ်သတိရတာပဲ.ခိခိ..တစ်ချို့များ ကပ်အလိုးခံသွားတာတွေကိုတောင်တွေ့ လိုက်ရတော့ အရမ်းဖီလင်တက်တယ်.. အင့်..နယ် ” နို့ လုံးကြီးတွေကသူ့ရင်ပတ်ပေါ်ပိနေတာမို့စို့မယ်ဆိုရင်တော့အနေအထားက ကောင်းပါရဲ့.. နယ်လို့သိပ်မထိမိလှဘူး။ဒါနဲ့ မမြထွေးရဲ့ကိုယ်ကြီးကိုနံဘေးလှိမ့်ချ ပေးလိုက်ပြီးနယ်တယ်။ဒါလည်းသိပ်မထိမိလှဘူးလားလို့ သူ့ကိုဟိုဖက်လှည့်ခိုင်းလိုက်ပြီးကျောဖက်ကဖက်လို့ဖိဆုပ်နယ် တာပေါ့။ကိုယ်ကနို့ တွေဆုပ်ချေနယ်နေ တော့သူ့လက်ကနောက်ပြန်ပစ်ပြီးလီးကို ဆွနေဆော့နေရော။
ပုဆိုးတွေထမီတွေ ကလည်းကျွတ်နေပြီဆိုတော့ခြေထောက် တွေနဲ့ကန်ကန်ပြီး ရောက်ချင်တဲ့နေရာ ရောက် .လွှင့်ပစ်လိုက်ကြတယ်။နို့နယ်ခံ နေရတာအားရပါးရကြီးဆိုတော့ လီးဆွ တဲ့လက်ကလည်တိုင်ကိုဖက်ပြီးခေါင်းကသမင်လည်ပြန်လှည့်လို့နှုတ်ခမ်းတွေကို စုပ်နမ်းပြန်တယ်။ဖင်ဆုံကြီးကော့ပစ်ပင့် တင်ပေးထားတာဆိုတော့ မင်းမင်းလီးကဖင်သားတွေအကြားကလျှော ထိုးဝင် သွားပြီးစောက်ခေါင်းဝ,ကိုတိုးဝင်နေပြီ။ စောက်ခေါင်းထဲတိုး တိုးဝင်လေလေ သူကဖင်ဆုံကြီးကိုကော့ကော့ပစ်ပေးလေ.. မင်းမင်းက ဖိဖိထိုးထည့်လေပဲ။ဖင်သား လုံးကြီးတွေနဲ့ မင်းမင်းဆီးခုံတို့ဖိကပ်နေ ပြီဆိုပေမယ့်ဖင်ဆုံကြီးခံနေတော့လီးက စောက်ခောင်းထဲအရင်းထိမဝင်နိုင်ဘူး။ ဒါနဲ့ မမြထွေးကအပေါ်ပေါင်လုံးကြီးကို ပင့်မြှောက်ပေးပြီးမင်းမင်းတင်ပါးပေါ်ကို နောက်ပြန်တင်ခွပေးထားလိုက်တယ်။ဒီ တော့မှအနောက်ကလိုးရတာ နည်းနည်း အဆင်ပြေပြီးလီးတစ်ဝက်ကျော်ကျော်အ ဝင်အထွက်ဆောင့်လို့ရတယ်။ဖီလင်တ အားတက်ပြီးစောက်ရည်တွေကရွှဲနေပြီ ဆိုတော့ရှောကနဲ ရှောကနဲဝင်နေလို့လိုး ရတာ အရသာရှိပေမယ့် အားမရဘူး။ဒါ နဲ့ တင်ပါးပေါ်ခွထားတဲ့ခြေထောက်ကို လက်တစ်ဖက်နဲ့မ,တင်ထားပြီးနို့ လုံးကြီး ဆုပ်ဆွဲလိုးတော့မှ တစ်ဖုံးဖုံးနဲ့ဆောင့်လို့ အရသာရှိလာတယ်။ ” ကောင်းရဲ့လား မိန်းမ ” ” တစ်အားကောင်း..အင့်..ဒီလိုသာလိုးလို့တော့ တစ်နေကုန်ခံနိုင်တယ် ” ခံနိုင်မှာပေါ့.တစ်ဖောင်းဖောင်းတစ်ဖုံးဖုံး ဆောင့်နေပေမယ့် သူ့ဖင်ဆုံသားအိအိကြီးကခံနေတော့ လီးကအရင်းထိမှမ ဝင်ပဲကိုး.။သူ့လီးတုတ်တာလောက်တော့ မမြထွေးစောက်ခေါင်းက ပြည့်ပြည့်လေး ခံကောင်းရုံလောက်ပဲရှိတယ်။အဲဒါနဲ့.ခြေ ဆင်းထားတဲ့မမြထွေးခြေထောက်ကိုခွပြီး ကိုယ်ကိုချွရင်း ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက် တယ်။လက်ကမ,ထားတဲ့ ပေါင်ကြီးကိုပုခုံးပေါ်ထမ်းတင်ပြီး သူ့ပုခုံးတွေကို လက် နှစ်ဖက်နဲ့အတင်းဆွဲပြီး လီးအရင်းထိဝင် အောင်တစ်ချက်ချင်း တစ်ချက်ချင်း ဖိဖိလိုးတာပေါ့။အဲလိုလိုးတော့ လီးကြီးတစ် ချောင်းလုံးသာမကဘူး..လီးတန်ကြော ကြီးတစ်ကြောလုံးဖိစန့်ပြီးစောက်ခေါင်း ထဲပိဝင်သွားတာ မမြထွေးကရင်ပတ်ကို တွန်းလိုက်..ဆီးခုံကိုတွန်းလိုက်နဲ့မချိ မ ဆန့် ရုန်းရင့်ခံရတယ်။ ” အာ့..အားဟာ့..မောင်..ဗိုက်ကြီး နေတာလေကွာ..အူးဟူး..အဲလောက် ကြီးဖိမလိုးနဲ့လေ..လီးကသားအိမ်ထဲထိ ဝင်တော့မယ်..အားဟာ့..ဖွဖွလိုး ဖွဖွ. အင်း..အဲလောက်ပဲ..အဲလောက်ပဲလိုးပါ ကွာ..” လီးအရင်းအထိသွင်းပြီးမလိုးရတော့ သိပ်မတင်းတိမ်လှဘူး။ ” အင့်..အင့် အင့်..အားမရဘူးမိန်းမ ရဲ့..လီးတစ်ချောင်းလုံးထည့်ချင်တာ ” ” အာကွာ…ဗိုက်ကြီးနေလို့ပါဆိုမှကွာ အဲလောက် လီးတစ်ချောင်းလုံးထည့်လိုး ချင်နေရင်လဲ ဒေါ်လေးမော်မော့် ကိုသွားလိုး..မောင့်အစ်မလဲ မောင်ပဲလီးသရမ်းထားတာဗိုက်ကြီးနေလို့လင်ယူတော့မလို့ တဲ့..မနက်ဖြန်ရွာကလာတောင်းကြလိမ့်မယ်..လွတ်တာဆိုလို့ မော်မော်ပဲရှိတော့ တယ်..သွားလိုးချည် ” မမြထွေးစကားဆုံးတော့ မင်းမင်း ငူ တူတူနဲ့ ဆောင့်ရမလို မဆောင့်ပဲနေရမ လိုလို..ပါးစပ်ကြီးဟ,နေတုန်း.အခန်းဝ, ကဒေါ်လေးဝင်လာတယ်. ” ခိခိ..တစ်ကယ်လား မမ..အကြိုက် ပဲ..ခိခိ မော်မော်တို့ကဒါမျိုးဆိုမငြင်းရက် ပါဘူး..ကုတင်ပေါ်အရောက်လာအလိုးခံ ပါ့မယ်..လီးအရင်းထိပဲလိုးလိုး..ဖွဖွလေးပဲလိုးလိုး..ခိခိ ဖယ်တော့..ဗိုက်ကြီးသည် တွေ ဖယ်ကြ..ဖယ် ” အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်….ပြီး။